Jim Pfaus ၏ "သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး ကိုယုံကြည်ပါ - လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္"ာရီဆန်ဆန်" ၏ YBOP တုံ့ပြန်မှု (ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
ငါ Pfaus ဆောင်းပါးအတွင်းတောင်းဆိုမှုများများစွာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ (အဆိုပါ Pfaus ဆောင်းပါးလင့်ခ်), ဒါကြောင့်ဂျင်မ် Pfaus အဆိုပါချန်လှပ်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည် 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (နှင့် စာပေနှင့်မှတ်ချက်အ 27 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း) လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကထုတ်ဝေခဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများအကြောင်း။ ယခုအချိန်အထိ“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, neuro-hormonal) တိုင်း၏ရလဒ်သည်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုသဘောတရားကိုထောက်ခံသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသည့်အခြေခံကျသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံခြင်းအပြင်လေ့လာမှုအနည်းငယ်တွင်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှု၊ libido ကျဆင်းခြင်းနှင့် vanilla porn ၏ပုံရိပ်များအပေါ်အာရုံကြောတုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
porn အသုံးပြုသူများအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုလေ့လာမှု ၅၀ သည်လည်းထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည် အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု ၃၇၀“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” (ပေ, MRI, fMRI, EEG) ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်ချွင်းချက်မပါဘဲဤလေ့လာမှုများအတူတူပင်စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းမှ neuroscience စာပေ၏ဤမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ထောက်ပြအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ, တကယ်တော့, အင်တာနက်စွဲလမ်းတဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်သည် - "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)"။
Update ကို (2019): ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေရေးလက်စွဲ၊ ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "
Update ကို (2019): သတင်းအစီရင်ခံစာများ Jim Pfaus ကိုမိန်းကလေးငယ်များနှင့်မသင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့ဖူးသူအဖြစ်သရုပ်ဖော်ပါ။ Pfaus သည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေရာချခံခဲ့ရပြီးနောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတက္ကသိုလ်မှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ Pfaus တွင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှု (နှင့်လိင်မှုကိစ္စပြုသူ ED မှထွက်သူများအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ခြင်း) ၏တည်ရှိမှုကိုဆန့်ကျင်။ နာတာရှည်သံသယဖြစ်စရာရှိသည်။ သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း
Jim Pfaus ရဲ့ဒီအပိုင်းမှာပါတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပုံပျက်ပုံတွေကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။
Jim PFAUS -“သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM) ၏ Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲထဲမှာမပါဝင်နေ, ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အသုံးပြုပုံသူတို့အများဆုံးသုတေသီများစွဲဖြစ်နားလည်သောအရာကိုဖွဲ့စည်းကြဘူး။ "
RESPONSE: “ သုတေသီအများစု” နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုချက်ကိုမထောက်ခံပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်စွဲစွဲသူသုတေသီအချို့သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ Cambridge တက္ကသိုလ်မှ Valerie Voon၊ Yale တက္ကသိုလ်မှ Marc Potenza၊ Max Planck Institute မှ Simone Kuhn နှင့်အခြားသူများသည်လေ့လာမှုများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီးရလဒ်များအရညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဒီ list ကိုကြည့်ပါ.
ထို့အပွငျက DSM လိင်အလုပ်အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရစ်ချတ် Krueger MD ပေါ်လာသော ကနေဒါသတင်းစာဆရာပြောသည် သူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်, သူလုံလောက်သောသုတေသနပြုရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်အခါ DSM နောက်ဆုံးမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲပါဝင်သည်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းမျှသံသယရှိခဲ့ကြောင်း။
စွဲကျွမ်းကျင်သူများ, စွဲဆေးပညာ၏ American Society (ASAM) အတွက်အမျှ စွဲ၎င်း၏သစ်ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ နှင့်ဖော်ပြ အားလုံး စွဲသည်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု” သည်တည်ရှိရုံသာမကမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံယန္တရားများနှင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများပါ ၀ င်သည်။ ASAM မှဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန် ၃၀၀၀ သည်ခက်ခဲသောအချက်အလက်များကိုပေးသောစွဲလမ်းစေသောသုတေသီများဖြစ်သည့် NIDA ၏အကြီးအကဲ Nora Volkow, MD ။ ပါရဂူဘွဲ့နှင့်အဲရစ်နတ်စတာ MD၊ Ph.D ။
FROM မှ quote ASAM FAQs -
5 ။ မေးခွန်း: “ ဤစွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်လောင်းကစား၊ အစားအစာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပါဝင်သောစွဲလမ်းမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အစားအစာနှင့်လိင်သည်စွဲလမ်းစေသည်ဟု ASAM ကအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပါသလား။
အဖြေ: “ လောင်းကစားခြင်းကိုစွဲလမ်းမှုသည်သိပ္ပံနည်းကျစာပေတွင်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကကောင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် DSM (DSM-V) ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုကလောင်းကစား ၀ တ်စုံကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြwithနာများနှင့်အတူကဏ္ section တစ်ခုတည်း၌ပင်ဖော်ပြထားသည်။ အသစ် ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလည်းဆုချီးဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေမှဆက်စပ်သည်မည်မျှဖော်ပြအသုံးပြုပုံရုံပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူစွဲ equating ကနေထွက်ခွာစေသည်။ ဤသည် ASAM တစ်ခုယူထားပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါသည် စွဲလမ်းတစ်ခုတည်းကိုသာမဟုတျကွောငျးအရာရှိတဦးကအနေအထား "ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခို။ " ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဦးနှောက် circuitry အကြောင်းနှင့်မည်သို့စွဲလမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုစွဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုကှာခွားကပြောပါတယ်။ ဒါဟာဦးနှောက်နှင့်ဆက်စပ် circuitry အတွက်ဆုလာဘ် circuitry အကြောင်းကိုပြောသွားပေမယ်အလေးပေးအကျိုးကို system ပေါ်တွင်ပြုမူသောပြင်ပဆုလာဘ်အပေါ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေစွဲ၏ဤအသစ်သောအဓိပ်ပါယျမှာဖော်ပြထားတဲ့ဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားသူနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။"
အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ရာနှင့်နိုင်ငံရေးအရ DSM အတွက်မူ၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကိုသတိရသင့်သည်။ DSM သည်အဖြစ်မှန်များကိုမဆုံးဖြတ်ပါ။ ဒါဟာအမျိုးသားစိတ်ကျန်းမာရေးဌာန (NIMH) ရဲ့အကြီးအကဲကအတော်လေးပြောနေတယ်။ တွမ် Insel ဖော်ပြထား အသစ်ထုတ်ဝေခဲ့သော DSM-5“တရားဝင်မှုရှိကြ“ Insel က“လူနာပိုကောင်းထိုက်"နှင့် NIMH မရှိတော့ DSM ရောဂါရှာဖွေအမျိုးအစားများအပေါ်အခြေခံပြီးသုတေသနရန်ပုံငွေလိမ့်မယ်လို့။ Insel ကသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်၊
“ DSM အမျိုးအစားကိုရွှေစံအဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
သို့သော်ကြီးမားသောသတင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့လက်ယားရဲ့အလွန်အကျွံသတိသတ်မှတ်ထားရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းပုံပေါ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါ ICD ၏နောက်တစ်နေ့ထုတ်ဝေ 2018 ထွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၏ beta ကိုမူကြမ်း အသစ်က ICD-11 "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" အတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည် - လိင်စွဲလမ်းမှု၊ “ စွဲလမ်းမှု”၊ “ ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု”၊ hypersexuality၊ porn စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
Jim PFAUS: "အဘယ်ကြောင့်ဤတွင်ဤသူသည်: ဆေးစွဲရုပ်သိမ်းပေးရန် ...... porn ကိုကြည့်စွဲလမ်းနေတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သူကအစဉ်မပြတ် porn ကိုကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူမတတ်နိုင်တော့တဲ့အခါစွဲလမ်းမှုကိုပြတဲ့ရုပ်ထွက်မထွက်လာဘူး။ သူဘယ်တော့မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမည်မဟုတ်ပါ။ "
RESPONSE: Pfaus သည်“ ဆေးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာများ” သည်“ စွဲလမ်းမှု” နှင့်တူညီကြောင်းအကြံပြုသည့်စာသားများစွာကိုအသုံးပြုသည်။ ပထမ ဦး စွာဆေးစွဲခြင်းနယ်ပယ်တွင်ကောင်းစွာတည်ရှိပြီးရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများမရှိခြင်းသည်ဆေးစွဲခြင်း၏တည်ရှိမှုကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်တောက်ခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသောဆေးစွဲခြင်းများကိုတသမတ်တည်းသတင်းပို့ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤစာမျက်နှာများရှိအစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ပါ။
Self-အစီရင်ခံဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ PDF ဖိုင်ရယူရန်
Pfaus ကဒီဟာတွေဟာသာမာန်အားဖြင့်ပြောတာပါ၊ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 10 လေ့လာမှုများ။ ထို့အပြင်ဆွမ်ဆီးနှင့်မီလန်တက္ကသိုလ်များကအင်တာနက်စွဲလမ်းသူများသည်အပြာသို့မဟုတ်လောင်းကစားဝိုင်းများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး၊ သူတို့က web သုံးပြီးရပ်တန့်သည့်အခါရုံမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုချွတ်လာမယ့်လူတွေကြိုက်တယ်။
စွဲလမ်းမှုတည်ရှိရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိရမည်ဟုပြောရာတွင် Pfaus သည်ရှုပ်ထွေးနေသည် စှဲမွဲမှု နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို။ ဥပမာအားဖြင့်သန်းနှင့်ချီသောသူများသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုအတွက် opioids (သို့) autoimmune အခြေအနေများအတွက် prednisone ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများကိုတာရှည်ခံယူသည်။ သူတို့၏ ဦး နှောက်နှင့်တစ်ရှူးများသည်၎င်းတို့အပေါ်မှီခိုလာပြီးချက်ချင်းအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းသည်ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်သေချာပေါက်စွဲကြသည်မဟုတ်။ စွဲတွင်ပါဝင်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများသည်“ စွဲခြင်းလက္ခဏာ” ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာများကို ဦး တည်စေသည်။ ခြားနားချက်မရှင်းလင်းဘူးဆိုရင်, ငါကဒီအကြံပြုပါသည် NIDA အားဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့ရှင်းပြချက်.
နီကိုတင်းကိုစွဲလမ်းစေသောအရာများအဖြစ်မကြာခဏမှတ်ယူလေ့ရှိသော်လည်းများသောအားဖြင့်ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသောအခါ Pfaus ၏“ withdrawal = စွဲ” အငြင်းအခုံပြိုကွဲသွားသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် DSM-5 သည်ဆေးပညာဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကိုအသစ်ဖန်တီးထားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းထဲသို့ထည့်သွင်းလိုက်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသာစွဲလမ်းစေနိုင်သည်။ ကြည့်ပါ ဒီ DSM-5 ထုတ်ဝေ.
Jim PFAUS -“ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, Anti-fapper ဇာတ်ကြောင်းများသောအားဖြင့်ဆွေးနွေးမှသာအမှတ်ဖြစ်ပါသည်: သူတို့က porn ဒေါင်းလုပ်ရပ်တန့်နှင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူတို့နောက်တဖန်ပုံမှန်စိုက်ထူရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောအပြီးယောက်ျားများ masturbating ရပ်တန့်။ "
RESPONSE: Pfaus ကပုံမှန် erectile လည်ပတ်မှုပြန်လည်ရရှိရန် porn-induced ED နှင့်အမျိုးသားများအတွက်“ ရက်အနည်းငယ်” ကြာမည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ယင်းအစား၊ ယေဘုယျအားဖြင့်လူငယ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်စိုက်ထူခြင်းကိုအောင်မြင်ရန်လများနှင့်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်နှစ်နှစ်အထိကြာတတ်သည်။ Pfaus သည်မကြာခဏညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါလက္ခဏာပြသည့်ပုံသဏ္spာန်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ အသက် (၂၃) နှစ်အရွယ် (၉) လကြာဆန့်ကျင်ဘက်ကာလအကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးပါဘူး။ စာဖတ်သူများသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည် ဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ တစ်ဦး 35 နှစ်အရွယ်ကျန်းကျန်းမာမာလူကိုလိင်စိတ်၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် anorgasmia / အရှုံးဖော်ပြ။ သူ့ကိုပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြန်လည်ရန်အဘို့အဒါဟာအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်း၏ 8-လအတွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
Jim PFAUS: "ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအထူးလေးနက်စွာ Marnia Robinson နဲ့ဂယ်ရီ Wilson ကပြည်နယ်အဖြစ် porn-စွဲထောက်ခံသူများအကြောင်း, porn erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှဦးဆောင်မယ့်အနေအထားကိုစောင့်ကြည့်သောအတန်ငယ်လူကြိုက်များစိတ်ကူးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ "
RESPONSE: ပထမဦးစွာငါ၏အစာအုပ် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ, (updated ဒီဇင်ဘာလ 2017) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှထွက်လာသောအရာ, ထိုကဲ့သို့အခက်အခဲ orgasming နှင့်ရပ်တည်စိုက်ထူအဖြစ် porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အမှာစကားပြောကြား။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်သူတွေအားဖြင့်ထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါငါပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များအပေါ်သွားဘာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုသူမည်သူမဆိုအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ (ရာပိုပြီးကတည်းကထွက်လာကြ, ငါရေးသားခဲ့သည်ဘယ်မည်သောအကောင်နှင့် aligns အားလုံးသောထားပါတယ်) ကအကြံပြုပါသည်။
ဒုတိယအချက်ကဂယ်ရီ Wilson ပဲမဟုတ်ဘူး။ ဒီစာမျက်နှာတွင် စာဖတ်သူများကိုအောင်မြင်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ 130 ကျွမ်းကျင်သူများက (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများ, podcasts တွေကိုနှင့်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲချိတ်ဆက်တတိယနီးပါး 40 လေ့လာမှုများနှင့်အောက်ပိုင်း arousal သို့မဟုတ်လိင်ပူးပေါင်း (ဒီ list ထဲမှာပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation သရုပ်ပြ) ။
တစ်ချိန်ကအမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုရှင်းပြခဲ့သည့်ရိုးရာအကြောင်းအချက်များသည် Erectile dysfunction မြင့်တက်လာခြင်း၊ သန္ဓေတည်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်း၊ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၌လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်စိတ်နိုးထစဉ်ကာလအတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှလျော့ကျသွားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက် (၁) သည် domains များမှအချက်အလက်များကိုစဉ်းစားသည်။ , လက်တွေ့, ဇီဝဗေဒ (စွဲ / urology), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်), လူမှုဗေဒ; နှင့် (40) ဤဖြစ်စဉ်၏အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေ ဦး တည်ချက်အဆိုပြုထား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူအားလုံးအစီရင်ခံစာများ, စီးရီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဦး နှောက်၏စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုအခြေခံသည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော etiology တစ်ခုအဖြစ်စူးစမ်းသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ (အကန့်အသတ်မရှိအသစ်အဆန်း၊ ပိုမိုပြင်းထန်သည့်ပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အလားအလာ၊ ဗီဒီယိုပုံစံစသည်တို့) သည်အမှန်တကယ်သို့အလွယ်တကူမကူးပြောင်းနိုင်သောအင်တာနက်အပြာစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွစေရန်လုံလောက်သောအစွမ်းထက်နိုင်သည် လိုချင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့်နှိုးဆွမှုလျော့ကျခြင်းများကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာ၊ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်စဲဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားပစ်ရှိသည်သောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု reverse မှတစ်ခါတစ်ရံတွင်လုံလောက်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ရလဒ်များ: ကုသမှုပြီးနောက်, ဤလူနာတွေအတွက်ကနဦးရလဒ်များကို, "နားမလည်" သူတို့ masturbatory အလေ့အထများနှင့်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏မကြာခဏဆက်စပ်စွဲဖို့, အားတက်စရာများနှင့်အလားအလာရှိပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်ဦးကလျှော့ချရေး 19 ထဲက 35 လူနာအတွက်ရရှိသောခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပ်မဖြစ် regressed နှင့်ဤလူနာကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
လိင်ကုထုံးနှင့်အတူအပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများနှင့် တွဲဖက်. , t ကိုသူကလူနာဗီဒီယိုများ, သတင်းစာတွေ, စာအုပ်တွေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပါအဝင်လိင်ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမှမဆိုထိတွေ့မှု, ရှောင်ရှားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု Croydon တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းငါ၏အမှုကနေယူပေါင်းစပ်ဖြစ်ပွားမှုများမှာ။ (အဆုံးစွန်သောအမှုနှင့်အတူလူနာ B), ကတင်ဆက်မှုအလားတူရောဂါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထှထှေကေုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသူငယ်ရွယ်ယောက်ျားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထင်ဟပ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ လူနာ B ကို သူထိုးဖောက်မှုမှတဆင့် ejaculate နိုင်ခြင်းကြောင့်တင်ဆက်သူတစ်ဦး 19 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူ 13 ခဲ့သောအခါသူမှန်မှန်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုမှတဆင့်မိမိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသူ့ကိုစေလွှတ်သောလင့်များမှတဆင့်ဖြစ်စေညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအားဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူက image ကိုသူ့ဖုန်းကိုရှာဖွေနေစဉ်ညတိုင်း masturbating စတင် ... သူအိပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ masturbate မပြုခဲ့ပါ။ ခက်ခဲပစ္စည်း (တရားမဝင်ဘာမျှ) သို့, (Hudson-Allez, 2010 ကိုကြည့်ပါ) ကိုမကြာခဏကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း, ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့ ...
6) လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2019) - Abstract:
ဤစာတမ်း၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းစူးစမ်း ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြောင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြဿနာများအနက်အဓိပ္ပာယ် (PIED) ။ ဒီအခွအေနေကနေဆင်းရဲခံရသောယောက်ျားထံမှပင်ကိုယ်မူလဒေတာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ လိမ်းဘဝသမိုင်းနည်းလမ်း (အရည်အသွေးပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအွန်လိုင်းဇာတ်ကြောင်းအင်တာဗျူးနှင့်အတူ) နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအွန်လိုင်းဒိုင်ယာရီ၏တစ်ဦးကပေါင်းစပ်အသုံးချခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာကိုသရုပ်ခွဲသော induction အပေါ်အခြေခံပြီး, (McLuhan ရဲ့မီဒီယာသီအိုရီအရ) သီအိုရီစကားပြန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အင်ပါယာစုံစမ်းစစ်ဆေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် causation အကြံပြုကြောင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုကဗီဒီယိုဒိုင်ယာရီသုံးယောက်စာသားကိုဒိုင်ယာရီနှင့်အတူ 11 အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ လူတို့သညျ 16 နှင့် 52 ၏အသက်အရွယ်အကြားပါ၏ သူတို့အစွန်းရောက်အကြောင်းအရာ (ဥပမာ, အကြမ်းဖက်မှုဒြပ်စင်ပါဝင်သော) arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပွိုင့်ရောက်ရှိသည်တိုင်အောင်ညစ်ညမ်း (များသောအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်း) ကိုအစောပိုင်းမိတ်ဆက်နေ့စဉ်စားသုံးမှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်းသတင်းပို့သည်။ လိင်စိတ်နိုးထသီးသန့် Bland နှင့်စိတ်မဝင်စားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံမှု rendering, အစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခါတစ်ဦးကဝေဖန်ဇာတ်စင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူတို့သညျညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်း,a"ကို re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စတင်ပေးသောအမှတ်တစ်ဦးကို real-ဘဝလက်တွဲဖော်နဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်များ။ ဒါကတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ဖို့ယောက်ျားအချို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။
အဆိုပါဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူပြီးမှ, ငါအင်တာဗျူးအပေါငျးတို့သအတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီဇာတ်ကြောင်းအောက်ပါအချို့ပုံစံများနှင့်ထပ်တလဲလဲ themes များသတိပြုမိပါပွီ။ ဤအရာများသည်: နိဒါန္း။ တစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးအများအားဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှီ, ညစ်ညမ်းစေရန်မိတ်ဆက်သည်။ တစ်ဦးအလေ့အထကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ တဦးတည်းပုံမှန်ညစ်ညမ်းလောင်မှစတင်ခဲ့သည်။ စက်လှေကား။ တစ်ခုမှာယခင်ညစ်ညမ်းနည်း "အစွန်းရောက်" ပုံစံများမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ညစ်ညမ်း, အကြောင်းအရာ-ပညာရှိပိုပြီး "အစွန်းရောက်" ပုံစံများကိုမှပြန်သွားလေ၏။ သဘောပေါက်။ တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံရဖို့ယုံကြည်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြဿနာများသတိပွုမိ။ "Re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်ကို။ တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိသို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြန်လည်နိုင်ရန်အတွက်လုံးဝကပပျောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှအဆိုပါဒေတာကိုအထက်ပါအကြမ်းဖျင်းပေါ်အခြေခံပြီးတင်ပြနေကြပါတယ်။
7) ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ကွဲအမျိုးသားများရဲ့အတွေ့အကြုံများ (2019): ရှက်ကြောက်ခြင်း Hidden - ယောက်ျားလေး ၁၅ ယောက်ကိုလူတွေ့မေးမြန်းသည်။ အမျိုးသားအတော်များများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ သုံးစွဲမှုအရှိန်မြင့်လာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာပြsexualနာများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ မိုက်ကယ်အပါအဝင်လိင် - လိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကောက်နုတ်ချက်များသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအတွင်းသူ၏လိင်မှုပြုမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပြီး၊
တချို့ကယောက်ျားကသူတို့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖြေရှင်းရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ရှာဖွေလျက်အကြောင်းဟောပြောသည်။ အကူအညီ-ရှာကြံမှာထိုကဲ့သို့သောကြိုးစားမှုလူတို့သညျအဘို့အတန်ဖိုးရှိရှိခဲ့များနှင့်အချိန်များတွင်ပင်အရှက်ကွဲခြင်း၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုဆိုးရွားဘူး။ မိက္ခေလအဓိကအားလေ့လာမှု-related စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသူတစ်ဦးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှိခြင်းခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု မိန်းမနှင့်နှင့်သူ၏အထွေထွေ Practitioner ဆရာဝန် (မိသားစုဆရာဝန်) ထံမှအကူအညီရှာ
မိုက်ကယ်: ဘယ်အချိန်မှာငါ 19 [မှာဆရာဝန်ထံသို့သွားလေ၏။ ။ ။ ] သူ Viagra သတ်မှတ်ထားသောနှင့် [ငါ့အပြဿနာ] ​​ရုံစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ဟုဆိုသည်။ တခါတရံအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်တခါတရံတွင်မအမှုကိုပြု၏။ ဒါဟာပြဿနာ porn [ခဲ့ငါ့အားပြကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးသုတေသနနှင့်စာဖတ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ။ ငါလူငယ်တစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်အဖြစ်ဆရာဝန်ကိုသွားနှင့်သူသည်ငါ့ကိုအပြာရောင်ဆေးလုံးပြဋ္ဌာန်းခဲ့လျှင်။ ], ထို့နောက်ငါအဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုကအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တူသောခံစားရတယ်။ သူကကျွန်မကို Viagra ပေးခြင်း, ငါ၏ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်တောင်းဆိုနေတာရပါမည်။ (23, အလယျပိုငျးအဘိဓါန် Eastern, ကျောင်းသား)
Phillip မိုက်ကယ်ကဲ့သို့မိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်အကူအညီရှာ၏။ မိမိအကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပြဿနာတစ်ခုသိသိသာသာလျှော့ချလိင် drive ကိုခဲ့သည်။ သူသည်မိမိအပြဿနာနှင့်သူ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရန်၎င်း၏လင့်များအကြောင်းကိုမိမိအမိသားစုဆရာဝန်ချဉ်းကပ်သောအခါ, မိသားစုဆရာဝန်သတင်းများအရပူဇော်ဖို့ဘာမျှခဲ့ရပြီးအစားအထီးကလေးမွေးဖွားအထူးကုသူ့ကိုရည်ညွှန်း:
Phillip: ငါတစ်မိသားစုဆရာဝန်ထံသို့ ဝင်. သူငါအထူးအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မယုံတဲ့သူအထူးကုမှငါ့ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ သူတို့ဟာတကယ်ပဲငါ့ကိုအဖြေတစ်ခုပူဇော်မယ့်ကိုအလေးအနက်ထားငါ့ကိုယူမခံခဲ့ရပါ။ ငါ testosterone ဟော်မုန်းရိုက်ချက်များခြောက်လပတ်သူ့ကိုပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်နှင့် $ 100 တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ခဲ့, နှင့်တကယ့်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့ဟာသူတို့ရဲ့လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသို့မဟုတ်အခြေအနေလုံလောက်သောခဲ့မခံစားရဘူး။ (29, အာရှ, ကျောင်းသား)
ပါ ၀ င်သူများကရှာဖွေတွေ့ရှိသောဆရာဝန်များနှင့်အထူးကုများသည်ဇီဝဆေးဝါးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများသာဖြစ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းစာပေတွင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ (Tiefer, 1996) ထို့ကြောင့်သူတို့၏အမျိုးသားများမိသားစု ၀ င်များထံမှရရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုသမှုသည်မလုံလောက်ဟုမှတ်ယူရုံသာမကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီများကိုထပ်မံရယူခြင်းမှလည်းသူတို့ကိုခွဲထုတ်ထားသည်။ ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသည်ဆရာဝန်များအတွက်အများဆုံးသောအဖြေဖြစ်သည် (Potts, Grace, Gavey, & Vares, 2004)၊ အမျိုးသားများမီးမောင်းထိုးပြသည့်အကြောင်းအရာများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ပိုမိုဘက်စုံသော client နှင့်ဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသည်။
နောက်ဆုံးလူတို့သညျသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသာမကြာသေးမီကစာပေအတွင်းလေ့လာခဲ့ပြီးကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ဖူးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဥပမာ, ပန်းခြံများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2016) , အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါရှာတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်လျော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူသူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမှစွပ်စွဲထားတဲ့ဆင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, အစီရင်ခံတင်ပြ။ ဒံယလေကသူတစ်ဦးစိုက်ထူရကိုစောင့်ရှောက်ရန်မတတျနိုငျသညျ့၌သူ၏အတိတ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်။ သူဟာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အခါဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းမှနှိုင်းယှဉ်မရသူ့ရည်းစား '' အလောင်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်နွယ်:
8) Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇) - အသစ်စက်စက်ပွနျလညျရှာဖှတှေ့နှင့်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချ။ ဗီဒီယိုက porn အလုပ်သမားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့လုလင် 50% နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာသို့မဟုတ်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး နှင့် porn (ပျှမ်းမျှအသက် 29 ခဲ့သည်) ။ အဆိုပါတုန်လှုပ်သုတေသီများအမျိုးသား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ,
9) အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2008) နဲ့လက်တွေ့တွေ့ဆုံ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသည်သူ၏အထီးလူနာအချို့ကိုအပေါ်ရှိခြင်းခဲ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိဖွစျလာသူတစ်ဦးစိတ်ရောဂါကရေးသားလေးလက်တွေ့ဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူဘက်စုံစက္ကူ, ။ အောက်ကကောက်နုတ်ချက်တစ် 31 တစ်နှစ်အစွန်းရောက် porn နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်သူကိုလူဟောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဤသည်သည်းခံစိတ်, တင်းမာမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှဦးဆောင် porn အသုံးပြုမှုကိုပုံဖော်ဖို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ရောထွေးစိုးရိမ်စိတ်ပြဿနာများအတွက်သရုပ်ခွဲ psychotherapy အတွက်တစ်ဦးက 31 နှစ်အရွယ်အထီးကြောင်းအစီရင်ခံ သူသညျမိမိလက်ရှိမိတ်ဖက်များကနှိုးဆွလိင်ဖြစ်လာအခက်အခဲကြုံနေရခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမသည်အကြောင်းကိုအများကြီးဆွေးနွေးပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို, ဖြစ်နိုင်သမျှငုပ်လျှိုးနေပဋိပက္ခများကိုသို့မဟုတ် (ကသူ၏တိုင်ကြားချက်များအတွက်ကျေနပ်ရှင်းပြချက်ရောက်ရှိလာသောမပါဘဲ) ဖိနှိပ်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာသူနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာမယ့်အထူးသဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ပေါ်မှီခိုသောအသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ အတန်ငယ်သတိထားသူကသူ့ဖန်စီဖမ်းမိနဲ့သူ့အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်း site ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ဖူးကြောင်းအတော်ကြာယောက်ျားမိန်းမတို့ပတျသကျကိုတခုတခု "မြင်ကွင်းတစ်ခု" ဖော်ပြခဲ့သည်။ အတော်ကြာအစည်းအဝေးများ၏သင်တန်းကျော်သူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း, မိမိနှစ်လယ်ပိုင်း 20s ကတည်းကရံဖန်ရံခါစေ့စပ်ခဲ့သောအတွက်လှုပ်ရှားမှုသည်သူ၏အသုံးပြုမှုကိုအပေါ်သို့တင်ပြသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, မိမိအသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များပြန်ခေါ်တခုတခုအပေါ်မှာတိုးပွားလာမှီခို၏ရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်ပါဝင်သည်။ သူလည်းသူကလိင်စိတ်နိုးထ၏ကြိုတင်, တပ်မက်လိုချင်သောအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်သည့်အတူအသစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုရှာဖှေနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအပြီးမဆိုအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းများ၏နှိုးဆွသောသက်ရောက်မှုတစ်ခု "သည်းခံစိတ်" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းသူ၏အသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်အထူးသဖြင့်ပစ္စည်းများ၏လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှသူ၏ "သည်းခံစိတ်" ဟုသူကအချိန်တစ်ဖက်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမဖြစ်ပွားသော်လည်း, က, သူ့ကိုလက်ရှိမိတ်ဖက်အတူ arousal ပြဿနာများညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ကွောငျးထငျရှားဖြစ်လာခဲ့သည် သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းသုံးပြီးခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. မိမိအစိုးရိမ်စိတ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအပေါ်သူ၏မှီခိုဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အသုံးပြုမှုကိုယ်တိုင်ကပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းသတိမထားမိသူသူမကိုသူ့အဘို့မဖြောင့်ဟုဆိုလိုတစ်ဖက်၌သူ၏ဆုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုအနက်ခဲ့သောနှင့်တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖလှယ်, ခုနစ်ရက်ကျော်နှစ်များတွင် သာ. ကြီးမြတ်ထက်နှစ်လ '' ကြာချိန်၏ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ဘူး သူဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ, အခြားနည်းတူအဘို့။
သူလည်းသူကယခုသူတခါသုံးပြီးမစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ကြောင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းအားဖြင့်နှိုးဆွနိုင်မှတ်ချက်ချသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကသူစအိုလိင်ဆက်ဆံ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုအတွက်နည်းနည်းအတိုးခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုကြသော်လည်းယခုကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိုလှုံ့ဆော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပင်သူကိုဆိုလိုသောသူအဖြစ်ဖော်ပြထားကြောင်းပစ္စည်း "edgier", "လုနီးပါးအကြမ်းဖက်သို့မဟုတ် coercive," ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိုအဘယ်သူမျှမအကျိုးစီးပွားဖြစ်နှင့်ပင်ပယ်-ချပြီးခဲ့ဖူးသော်လည်းယခုသူ့ထံမှတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရူးနှမ်းသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအသစ်ကိုဘာသာရပ်များအချို့နှင့်အတူသူနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုပင်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်မသက်မသာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
10) ခေါ်ဆောင်သွားသည့် latency ကာလအတွင်းမှာတော့ Disruption နှင့်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှု, အွန်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီး (2009) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေး Exploring - "အောင်းနေချိန်ကာလ" (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စဉ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - လေ့လာလက်ရှိ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (SEM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း) အကြားဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို၏ပျမ်းမျှအသက် 22 ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ်, အောင်းနေချိန်ကာလအတွင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူတစ်ပင်အားကောင်းဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
11) နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲ (2009) ၏ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း - Porn အသုံးပြုမှုအမျိုးသမီးအတွက်ယောက်ျားနဲ့အနုတ်လက္ခဏာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင်တွင်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ porn ကိုအသုံးမပြုခဲ့သူစုံတွဲများအဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုကနေအနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
12) ဆိုက်ဘာ-porn မှီခို: အီတလီအင်တာနက် Self-အကူအညီနဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရောက်သောအသံ (2009) - ဤလေ့လာမှု cyberdependents (noallapornodipendenza) အတွက်အီတလီ Self-အကူအညီနဲ့အုပ်စု 302 အဖွဲ့ဝင်များကရေးသားနှစ်ထောင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုဇာတ်ကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်စဉ် (400-2003) မှ 2007 မက်ဆေ့ခ်ျနမူနာ။ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှသက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်:
အများသောသူတို့ကသူတို့အခွအေနေသည်းခံစိတ်သစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့စွဲတင်းမာမှုများ၏ဆင်တူသည်။ ပို. ပို. ပို. ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထူးထူးဆန်းဆန်းများနှင့်အကြမ်းဖက်ပုံရိပ်တွေများအတွက်တကယ်တော့ရှာဖွေရေးအတွက်သူတို့ထဲကအတော်များများဟာ, bestiality ပါဝင်သည် ... ။
အတော်များများကအဖွဲ့ဝင်များတိုးလာခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြား, fလူသေလမ်းလျှောက် "ကဲ့သို့မိမိတို့၏အစစ်အမှန်အသက်တာ၌ eeling"(" vivalavita "# 5014) ။ အောက်ဖော်ပြပါဥပမာသည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကို ("sul" # 4411) အခိုင်အမာဖော်ပြသည်။
အတော်များများကသင်တန်းသားများကိုသူတို့ဖော်ပြထား ပုံမှန်အားဖြင့်တင်းမာမှုလွှတ်ပေးရန်အဆုံးစွန်, အစွန်းရောက် image ကိုစောင့်ဆိုင်း, ejaculate နိုင်ခြင်းမှာရှာဖွေနေနှင့်၎င်းတို့၏လက်၌မိမိတို့စိုက်ထူလိင်တံကိုကိုင်ပြီးဓါတ်ပုံတွေကိုနှင့်ရုပ်ရှင်စုဆောင်းနာရီဖြုန်းနေကြတယ်။ လူများစွာအတွက်နောက်ဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်သူတို့၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေသည် (supplizio) (“ incercadiliberta” # 5026) …
လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးတွင်ပြဿနာများမကြာခဏထက်ပိုပါတယ်။ လူတွေကသူတို့စိုက်ထူပြဿနာများ, သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိခြင်း, လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အတိုးမရှိခြင်း, ပူကိုစားခဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့တူခံစား, စပ်အစားအစာ, အကျိုးဆက်သာမန်အစားအသောက်မစားဘဲနေလို့ရပါတယ်ရှိတိုင်ကြား။ ဒါ့အပြင်ဆိုက်ဘာမှီခို၏အိမ်ထောင်ဖက်များကဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်အများအပြားကိစ္စများတွင်, လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း ejaculate ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူအထီး orgasm ရောဂါ၏လက္ခဏာများရှိပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက် desensitization ၏ဤအသိကိုကောင်းစွာအောက်ပါကျမ်းပိုဒ် ( "vivaleiene" #6019) တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်:
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါသည်ငါ့ရည်းစားနှငျ့ရငျးနှီးစပ်လျဉ်းရ၏ ပထမဦးဆုံးနမ်းပြီးနောက်ငါမဆိုအာရုံမခံစားရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းမှာအားလုံးမကောင်းတဲ့အဘယ်အရာမျှ။ ငါအလိုခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့သုတ်ရည်ထိပြီးအောင်မပေးခဲ့ပါဘူး။
အတော်များများကသင်တန်းသားများကိုအိပ်စက်ခြင်းစဉ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း, ဒါမှမဟုတ်အစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့၏ "Telematics အဆက်အသွယ်" နှင့်သူတို့၏စိတ်တွင်ညစ်ညမ်း flashbacks တစ်နေရာအနှံ့နှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ရှိနေခြင်း "လိုင်းပေါ် chatting" တွင်မိမိတို့၏အစစ်အမှန်အကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အမျှတစ်ဦးကိုမှန်ကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပြောဆိုချက်ကိုအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်ထံမှအများအပြားထောက်ခံစာများကသံယောင်နေသည်။ သို့သော်ဤဇာတ်ကြောင်းများတွင် collusion နှင့်ညစ်ညမ်းမှုပုံစံများလည်းပါရှိသည်။ ဤမိတ်ဖက်အဖွဲ့များ၏အထင်ရှားဆုံးမှတ်ချက်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အီတလီမိမိကိုယ်ကိုအကူအညီနဲ့အုပ်စုစေလွှတ်မက်ဆေ့ခ်ျအများစုဟာ (အစစ်အမှန်ဘဝ၌) salience ၏မော်ဒယ်သည်နှင့်အညီ, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ, သည်းခံစိတ်, ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့လူ့ပဋိပက္ခထိုသင်တန်းသားများအားဖြင့်ရောဂါဗေဒ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြကြဘူးGriffiths (2004) မှတီထွင်ခဲ့သောရောဂါရှာဖွေရေးပုံစံ။
13) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် - ဤ EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။
ယင်းနှင့်အတူအညီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများ, ဒီ EEG လေ့လာမှု လည်း ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအစီရင်ခံတင်ပြ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန် - porn ပိုမိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်ဘာသာရပ်များ '' အလိုဆန္ဒဟာသူတို့ရဲ့ porn အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။
အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) တုံ့ပြန်မှုနည်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွဲလမ်းမှု၏ထူးခြားချက်များဖြစ်သော sensitization & desensitization ။ ရှစ် သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအမှန်တရားရှင်းပြ: ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
14) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - ကိုလောင် porn ၏ပမာဏနှင့်အတူ correlating3သိသိသာသာစွဲလမ်း-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရသည့်တစ်ဦးကမက်စ် Planck လေ့လာမှု။ ဒါဟာအစကိုပိုမိုညစ်ညမ်း vanilla porn မှထိတွေ့မှု (.530 ဒုတိယ) ရှင်းလင်းတုံ့ပြန်အတွက်လျော့နည်းဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုကိုလောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး 2014 ဆောင်းပါးခဲရေးသားသူအတွက် ဆီမှKühnကပြောပါတယ်:
15) နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဒီ fMRI လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ာင်းထင်ဟပ်ပေးသောညစ်ညမ်းစွဲအတွက်ာင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစကြောင့်ညစ်ညမ်းစွဲကပိုက "" လို၏လက်ခံခဲ့သည်စွဲမော်ဒယ် fit ကိုတွေ့ပေမယ့် မဟုတ် ပိုပြီး "က" like နှိပ်။ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအခက်အခဲရရှိစိုက်ထူ / arousal ခဲ့: အဆိုပါသုတေသီများလည်းဘာသာရပ်များ၏ 60% (25 ပျှမ်းမျှအသက်) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ porn ကို အသုံးပြု. ၏ရလဒ်အဖြစ်သို့သော်လည်း, porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။ လေ့လာမှုကနေ ( "CSB" compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်):
16) ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) - တစ်ဦးကစက္ကန့် EEG လေ့လာမှုကနေ နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla por ၏ဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုခဲ့ဎ။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက "ဒီရလဒ်တွေကိုမလုပ်ပဲporn စွဲ debunk။" ဘာ တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
၏အဖြစ်မှန်မှာတော့တွေ့ရှိချက် Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015။ ထိုမှတပါး, အခြား EEG လေ့လာမှု အမျိုးသမီးတွေအတွက် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှု porn မှလျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်ပိုင်း EEG ဖတ်ဘာသာရပ်များပုံမှလျော့နည်းသတိထားရမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလို။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို vanilla porn ၏ငြိမ်ပုံရိပ်တွေမှ desensitized ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ (habituated သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီကိုကြည့်ပါ ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။ ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကို (စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီ) တွင် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
17) မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015) - ဤအီတလီလေ့လာမှု urology ပါမောက္ခကပူးတွဲရေးသားအထက်တန်းကျောင်းအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ် Non-စားသုံးသူအတွက် 16% (နှင့်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းစားသုံးသူများအတွက် 0%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ပါတ်အစီရင်ခံစာတစ်ကြိမ်ထက် porn ကိုပိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအကြောင်း 6% ။ လေ့လာမှုမှ:
18) 115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းစသည့် hypersexuality မမှန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားများ (ပျမ်းမျှအသက် ၄၁.၅) ကိုလေ့လာခြင်း။ အမျိုးသား ၂၇ ယောက်ကို“ ရှောင်လွှဲနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပတ်လျှင် ၇ နာရီအထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နာတာရှည် porn မှ masturbated သူယောက်ျား၏ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (porn-သွေးဆောင် ED ရန်ရှေ့ပြေး) နဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့.
19) ယောက်ျားရဲ့လိင်ဘဝနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှပြန်လုပ် Exposure ။ တစ်ဦးကနယူးပြဿနာ? (2015) - ကောက်နှုတ်ချက်:
20) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ: တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား? (2015) - နှင့်အတူ related ခံခဲ့ရပါတယ် porn မှ Masturbating လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရငျးနှီးလျော့နည်းသွားသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
21) Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့်နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား Hypersexuality (2015) - စစ်တမ်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် hypersexuality ၏အစီအမံများအကြားပြင်းထန်သောဆက်စပ်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု erectile လည်ပတ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှုဒေတာချန်လှပ်ပေမယ့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုမှတ်ချက်ချသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
22) ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူ (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တစ်ခုအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို - စစ်တမ်းကဒီမှာစာရင်းအများအပြားသည်အခြားလေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိတဲ့ဘုံဆောင်ပုဒ်အစီရင်ခံ: Porn / လိင်စွဲဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရကိုကွောကျရှံ့) နဲ့ပေါင်းစပ် သာ. ကြီးမြတ် arousabilty (သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်မတရားသော) သတင်းပို့ပါ။
23) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016) - တစ်ဦးဦးဆောင်သုတေသနပြုတက္ကသိုလ်ကနေဒီဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှုပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့လျှော့ erectile function ကိုနှင့်လျှော့ချခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည် သာ. ကြီးမြတ်မတရားသောခံစားခဲ့ရသညျ။ အဆိုပါလေ့လာမှုက "လူတို့သညျရှုမွငျကွ porn ၏ 49% အဖြစ်တင်းမာမှုအစီရင်ခံရန်ပုံပေါ်ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ "(ကိုကြည့်ပါ လေ့လာမှုတွေ ) porn အသုံးပြုမှု porn နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့လေ့ / desensitization သတင်းပို့ကောက်နုတ်ချက်:
24) ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016) - အခြားသောလေ့လာမှုများစွာကဲ့သို့ပင်တစ်ကိုယ်ရေသုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုတင်ပြကြသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ပိုများသောအထူးသ, အဘယ်သူမျှမအသုံးပြုသောဘယ်မှာစုံတွဲများ, တစ်ဦးချင်းစီသည်အသုံးပြုသူများခဲ့သောသူတို့ကိုစုံတွဲများထက် ပို. ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည် (ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Cooper က et al ။ , 1999; Manning, 2006), SEM ၏တိုက်ပိတ်အသုံးပြုမှုကိုအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များအတွက်ရလဒ်များကြောင့်ဆန္ဒပြနေသော။
အဆိုပါအလုပ်သမား ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES), လေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား porn အသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်တစ်ဦး "ပိုဆိုးလိင်ဘဝ" နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "လိင်ဘဝက" မေးခွန်းတွေနဲ့ porn အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းအပေါ် PCES "အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ" အကြားဆက်စပ်မှုဖော်ပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
25) ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) -“ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ” (CSB) သည်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစွဲသူများဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တစ်ပတ်ကို ၂၉ မိနစ်ခန့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက CSB ဘာသာရပ် ၂၀ မှ ၃ ခုသည်အင်တာဗျူးသူများကို“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူသောရောဂါ” ခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
26) ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား Associative လမ်းကြောင်း (2017) - ဒီလေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးစာရင်းထဲတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုလူအများစုကလိင်မှုနှိုးဆွမှုရရှိရန်ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်း (သို့မဟုတ်လိုအပ်မှုရှိခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
27) "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူးထင်တယ်": ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ (2017) ၏နမူနာအကြားကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိသြစတြေးလျလူမျိုးတို့၏အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသူများ (n = ၈၅၆) ကို 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကသင့်ဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သလဲ' ဟူသောအဖွင့်မေးခွန်းဖြင့်မေးခဲ့သည်။
28) လုလင်တို့သည် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic အကြောင်းတရားများ - "နှောင့်နှေးသုက် (DE) တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏အခန်းက္ပ" ဟုခေါ်နေတဲ့အပိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤအပိုင်းကိုတစ်ဦးထံမှကောက်နုတ်ချက်:
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုး Althof ရဲ့ဒုတိယနှင့်တတိယသီအိုရီနှင့်ဆက်စပ် DE ၏တိုးလာအကြောင်းတရားများထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ 2008 ထံမှအစီရင်ခံစာများလူများ 14.4 နှင့် 13% ၏အသက်အရွယ်မှာအနည်းဆုံး daily.5.2 တစ်ဦးက 76 လေ့လာမှုသည်ဤတန်ဖိုးများကိုနှစ်ဦးစလုံးအသီးသီး% နှင့် 2016% 48.7 မှတိုးမြှင့်ခဲ့သောကြောင့်ထင်ရှားညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးမတိုင်မီယောက်ျားလေးများ၏ပျှမ်းမျှ 13.2% ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သည်ပေါ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ် 76 CSB ပြလူနာများနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုးကတဆင့် DE စေတယ်။ Voon et al ။ CSB နှင့်အတူလုလင်တို့သည်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမိမိတို့၏အသက်အရွယ်-controlled ကျန်းမာ peers.75 ထက်တစ်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကွောငျးတှေ့ CSB နှင့်အတူလုလင်တို့သည် DE ၏ Althof ရဲ့တတိယသီအိုရီသားကောင်လဲဦးစားမှုကြောင့်ရန်ပူးပေါင်းလိင်ကျော်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရှေးခယျြနိုငျ ဆက်ဆံရေးအတွက် arousal တစ်မရှိခြင်း။ ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးလာအရေအတွက်ကလည်း Althof ရဲ့တတိယသီအိုရီမှတဆင့် DE စေတယ်။ 487 အထီးကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးလေ့လာမှုတွင်, ဆန်း et al ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းစီပန်းခြံ et al ကအမှုအစီရင်ခံစာအတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်ဦးစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံကျော်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ဦးမွငျ့မားသောအန္တရာယ်မှာအစစ်အမှန်ဘဝ partners.76 နှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးအပြုအမူတွေတစ်လျော့နည်းသွား Self-အစီရင်ခံတင်ပြခံစား၏အသုံးပြုမှုကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့များကိုတွေ့ ။ အခက်အခဲယခင်ခြောက်လသူ့ရဲ့စေ့စပ်နှင့်အတူအော်ဂဇင်ရရှိနဲ့အတူတင်ဆက်တစ်ဦးက 20 နှစ်အရွယ်စစ်သားစုဆောင်းရေးအထီး။ တစ်ဦးကအသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းလူနာချထားစဉ် masturbate ဖို့ "အတုလိင်အင်္ဂါ" အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့လိင်ကစားစရာများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်မှီခိုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူကအော်ဂဇင်တစ်ခုတိုးဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် fetish သဘာဝတရား၏အကြောင်းအရာလိုအပ်သည်။ သူကပိုပြီးအတွက်သရုပ်ပြအဖြစ်အမှန်တကယ် intercourse.77 အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအတွက်တစ်ဦးတိုး, Althof ရဲ့ဒုတိယသီအိုရီမှတဆင့် DE ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်မှာလူပျိုတို့ကိုနေရာကြောင်းလှုံ့ဆော်တွေ့ရှိခဲ့သောကွောငျ့မိမိစေ့စပ်ဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ခံသော်လည်းသူ၏ကစားစရာ၏ခံစားချက်ပိုမိုနှစ်သက် အောက်ပါအမှုအစီရင်ခံစာ: Bronner et al ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူမ၏ရန်ဆွဲဆောင်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းသူ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရန်မအလိုဆန္ဒ၏တိုင်ကြားချက်နှင့်အတူတင်ပြတစ် 35 နှစ်အရွယ်ကျန်းကျန်းမာမာလူကိုမေးမြန်းထားသည်။ တစ်ဦးကအသေးစိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းကဒီဇာတ်လမ်းသူနေ့စွဲရန်ကြိုးစားခဲ့အတိတ် 20 မိန်းမနှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကကနဦး zoophilia, ကျွန်ခံ, sadism နှင့် masochism ပါဝင်သည်ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်း၏ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာလိင်လိင်, orgies နှင့်အကြမ်းဖက်လိင်တဲ့အထိတိုးတက်။ သူကမိန်းမနှင့်လိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားမိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်ညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများမြင်ယောင်မယ်လို့သို့သော်တဖြည်းဖြည်း working.74 လူနာရဲ့ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောဘဝအကြားကွာဟချက်ကိုအလိုဆန္ဒ၏ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေကြီးမားလွန်းဖြစ်လာခဲ့သည်တော့ဘူး။ Althof အဆိုအရ, ဒီအော်ဂဇင်တစ်ခုတိုးဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် fetish သဘာဝတရား၏ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာလိုအပ်၏ဤထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ et al အားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အချို့ patients.73 အတွက် DE အဖြစ်တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ် hyperactivity။ လူတညစ်ညမ်းအားမိမိလိင်စိတ်နိုးထ sensitizes အမျှအမှန်တကယ်အသက်တာ၌လိင်မရှိတော့ ejaculate (သို့မဟုတ် ED ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်စိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်) အားလျော်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင် .77
29) ညစ်ညမ်း ပို. ပို. ထိခိုက်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေး Brno ရဲ့တက္ကသိုလ်ဆေးရုံလေ့လာမှု (2018) ကပြောပါတယ် - ချက်စကားနဲ့ ဤ YBOP စာမျက်နှာတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တိုတိုနှင့်ဆေးရုံဝက်ဘ်ဆိုက်မှပိုမိုကြာရှည်သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်ဖြစ်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှကောက်နုတ်ချက်များ -
တိုးမြှင့်အသုံးပြုခြင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ Brno ရဲ့တက္ကသိုလ်ဆေးရုံအားဖြင့်တနင်္လာနေ့ဖြန့်ချိမယ့်လေ့လာမှုအရသိရသည်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး ပို. ပို. ထိခိုက်ခြင်းနှင့်လုလင်ပင်ကျန်းမာရေးဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာအများအပြားလုလင်တို့သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးယင်းဒဏ္ဍာရီ၏ရိုးရှင်းစွာပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအဘို့ပြင်ဆင်ထားကြဘူးဟုပြောသည်။ အတော်များများကယောက်ျားကိုယ်ထိလက်ရောက်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်နှိုးဆွရနိုင်ဘူးညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်အပေါ်လှညျ့လေ့လာမှုကဆက်ပြောသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပင်ဆေးကုသမှုလိုအပ်ခဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုသည်။
Brno အတွက်ဌာနဆေးရုံ၏ Sexological ဌာနများတွင်ငါတို့သည်လည်းညစ်ညမ်း၏ရလဒ်အဖြစ်ပုံမှန်လိင်ဘဝကိုရှိသည်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ခဲ့မဟုတ်သောလုလင် ပို. ပို. မကြာခဏဖြစ်ပွားမှုမှတ်တမ်းတင်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ဘဝကို“ အမျိုးမျိုးကွဲပြားခြင်း” မျှသာမဟုတ်ဘဲမကြာခဏမိတ်ဖက်လိင်အရည်အသွေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုဘရိုတက္ကသိုလ်ဆေးရုံရှိလူနာများတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်သက်သေမပြနိုင်ခြင်းအားဖြင့်မသင့်လျော်သောစောင့်ကြည့်မှုများကြောင့် လိင်အကြောင်းအရာ, ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများသို့ရတဲ့နေကြသည်။
အလယ်အလတ်အရွယ်၌အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များအားလိင်စိတ်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများဖြင့်အစားထိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ လိင်ဆက်ဆံသူနှင့်သာသက်ဆိုင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအန္တရာယ်ရှိမှုနှင့်အတူပုံမှန် (အစစ်အမှန်) လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုများကို sensitivity သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာမိတ်ဖက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှု၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများလိုအပ်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုနှင့်နီးကပ်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စွဲစွဲလမ်းမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လိင်မှုကိစ္စသည်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအရည်အသွေးသည်မလုံလောက်ပါ၊ ဤလူများသည် (ဥပမာ - ဆော်ရို - မက်ဆစ်ရှ်သို့မဟုတ်သတ္တဗေဒပညာ) စော်ကားလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ရလဒ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံစောင့်ကြည့်မှုသာလိင်အသက်တာ၌အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှဆောင်ရွက်ဘယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, လူမှုရေးအထီးကျန်မှဦးဆောင်ဆက်ဆံရေး၏ရောဂါ, နှောင့်အယှက်အာရုံစူးစိုက်မှု, သို့မဟုတ်အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရား၏လျစ်လျူရှုဖြင့်ထင်ရှားသောစွဲ, ဖြစ်ပေါ်စေမည်။
30) အင်တာနက်ကိုခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2018) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်လျှော့ချစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ငယ်ရွယ်လူဦးရေအတွက်တိုးပွားလာဘုံဖြစ်ကြသည်။ 2013 တစ်ဦးထံမှအီတလီလေ့လာမှုမှာတော့ 25 မှတက် ED ခံစားနေရပြီးဘာသာရပ်များ၏% 40  အသက်အောက်မှာ ရှိ. , 2014 ထုတ်ဝေအလားတူလေ့လာမှုမှာပိုမိုကနေဒါ၏ထက်ဝက်ထက်လိင် 16 နှင့် 21 ၏အသက်အရွယ်အကြားယောက်ျားကြုံတွေ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ  အချို့မျိုးကနေခံစားခဲ့ရသည်။ psychogenic ED မြင့်တက်  အပေါ်ကြောင်းအကြံပြု, တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အော်ဂဲနစ် ED နှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လူနေမှု၏ပျံ့နှံ့မှုသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားမထားပါဘူးဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ ဤအ -although "တခြားနေရာခွဲခြားမရချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်" ကိုမကြာခဏအမူအကျင့်စှဲအဖွစျဖျောပွနေကြသည်အဖြစ် DSM-IV-TR, ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်း, စျေးဝယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ် hedonic အရည်အသွေးတွေနှင့်အတူအချို့သောအပြုအမူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် [4 ] ။ မကြာသေးမှီကစုံစမ်းစစ်ဆေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်အမူအကျင့်စွဲ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြံပြုထားပါတယ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် neurobiological လမ်းကြောင်းမြားတှငျပွောငျးလဲအမျိုးမျိုးသောဇစ်မြစ်၏ထပ်ခါတလဲလဲ, supernormal လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းများအနက်ပြဿနာကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုမကြာခဏမကြာခဏနှစ်ခုဖြစ်ရပ်အကြားမျှနှင့်နယ်နိမိတ်နှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်အချက်များအဖြစ်ကိုးကားထားပါသည်။ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများကဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏အမည်မဖော်, တတ်နိုင်နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း၏အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖို့ဆွဲဆောင်ကြသည်နှင့်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ယင်း၏အသုံးပြုမှုတစ်ဦးကျဘာစွဲမှတဆင့်အသုံးပြုသူများကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောဤကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူများလိင်၏ "ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်" အခန်းကဏ္ဍကိုမေ့လျော့ဖို့ပိုများပါတယ်, ရှာတွေ့ လိင်ဆက်ဆံမှုမှာထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရွေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအတွက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှား။
စာပေမှာတော့သုတေသီများအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘော function ကိုအကြောင်းကိုစိတ်တိုးပွားဖြစ်ကြသည်။ ဆိုးကျိုးရှုထောင့်ကနေ, ကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော masturbatory အပြုအမူ, ဘာစွဲနှင့်ပင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအကြောင်းမရှိကိုယ်စားပြုတယ်။
31) Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ Related ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှိပါသလား? Cross-Section နှင့်ငုပ်လျှိုးနေကြီးထွား Curve ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း "(2019) မှစ. ရလဒ်များ - လူသားများကိုနှောက်ယှက်ပေးသောသုတေသီရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"နှင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကအခိုင်အမာ"အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်အခြားစှဲကနေလုပ်ငန်းဆောင်တာ"ယခုညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED အားမိမိ Dexter လှည့်လိုက်ပါတယ်။ သော်လည်းဒီ ယောရှုသည် Grubbs-ရေးသားလေ့လာမှုများအကြားဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် နှစ်ခုလုံး porn စွဲ နှင့် လိင်ကမလှုပ်မရှားယောက်ျားနဲ့ ED နှင့်အတူအရှင်အများအပြားယောက်ျားဖယ်ထုတ်ပြီးစဉ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း ()ဒါဟာလုံးဝ porn-သွေးဆောင် ED (PIED) debunked မူလျှင်သည်အတိုင်း, စက္ကူဖတ်တယ်။ ဤသည်ခဲ့ကြောင်းသူ၏ "စပ်လျဉ်းဒေါက်တာ Grubbs များ၏အစောပိုင်းသံသယရှိတောင်းဆိုမှုများနောက်တော်သို့လိုက်ကြပါပြီသောသူတို့အားအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ"မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ဒီကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရှုပါ အဆိုပါအချက်အလက်များသည်။
အဆိုပါ Grubbs စက္ကူတသမတ်တည်းမြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားဆက်စပ်မှု downplays ဆက်စပ်မှုနေစဉ် ခဲ့ကြ အုပ်စု (၃) စုလုံးတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည် - အထူးသဖြင့်နမူနာ (၃) အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အများဆုံးနမူနာဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးညစ်ညမ်းမှုနှုန်းကိုအသုံးပြုသောကြောင့်အများဆုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောနမူနာဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဒီနမူနာရဲ့အသက်အပိုင်းအခြား PIED အစီရင်ခံအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ နမူနာ (၃) သည်အဆင့်မြင့်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောစိုက်ထူနိုင်မှုတို့အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်နွယ်မှုရှိသည် (-0.37)။ အောက်က3အုပ်စုများ porn ကြည့်နှင့် (အပျက်သဘောဆောင်သောနိမိတ်လက္ခဏာထက် သာ. ကြီးမြတ်သော porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူကိုဆိုလိုသည်) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ erectile လည်ပတ်ငွေပမာဏအကြားဆက်စပ်မှုသူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှအားနေ့စဉ်မိနစ်နှင့်အတူနေသောခေါင်းစဉ်:
နမူနာ 1 (147 ယောက်ျား): ပျမ်းမျှအသက် 19.8 - ပျမ်းမျှ 22 porn / နေ့၏မိနစ်။ (-0.18)
နမူနာ2(297 ယောက်ျား): ပျမ်းမျှအသက် 46.5 - ပျမ်းမျှ 13 porn / နေ့၏မိနစ်။ (-0.05)
နမူနာ3(433 ယောက်ျား): ပျမ်းမျှအသက် 33.5 - ပျမ်းမျှ 45 porn / နေ့၏မိနစ်။ (-0.37)
မျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ရလဒ်များကို: အနည်းဆုံးအသုံးပြုအုပ်စု (#3) သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားအနည်းဆုံးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့စဉ်အရှိဆုံး porn (#2) အသုံးပြုခဲ့တဲ့နမူနာပိုမိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိုက်ထူအကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် Grubbs အစားကပျောက်ကွယ်သွားအောင်ကြိုးစားရန်စာရင်းအင်းထိန်းသိမ်းရေးအသုံးပြုခြင်း၏, မိမိရေး-Up ၌ဤပုံစံကိုအလေးပေးသည်မဟုတ်လော အနှစ်ချုပ်ရန်:
နမူနာ #1: ပျမ်းမျှအသက် 19.8 - 19 နှစ်အရွယ် porn အသုံးပြုသူများကမရှိသလောက် (သာ 22 မိနစ်တစ်ရက်သုံးပြီးအထူးသဖြင့်အခါ) နာတာရှည် porn-သွေးဆောင်သတင်းပို့သတိပြုပါ။ ၏ကျယ်ပြန့်အများစု porn-သွေးဆောင် ED ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ YBOP 20-40 အသက်ယောက်ျားအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်ကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့် PIED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ကြာပါတယ်။
နမူနာ #2: ပျမ်းမျှအသက် 46.5 - သူတို့ကတစ်နေ့လျှင်သာ 13 မိနစ်ပျမ်းမျှ! 15.3 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးစံသွေဖည်မှုနှင့်အတူဤလူတို့သညျအခြို့သောအဘို့ကိုငါးဆယ်-တစ်ခုခုရှိကြ၏။ ဤရွေ့ကားအသက်ကြီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (တစ်ခုတည်းကိုသာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှအေးစက်သူတို့ကိုလျော့နည်းအားနည်းချက်အောင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ) စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးထွက်မစတင်ခဲ့ပါဘူး။ Grubbs တွေ့ရှိခဲ့သကဲ့သို့အမှန်စင်စစ်, အနည်းငယ်အသက်ကြီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအမြဲ (ထိုကဲ့သို့သောနမူနာ 33 အတွက်3ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ရှိသူများကဲ့သို့) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဒစ်ဂျစ်တယ် porn ကို အသုံးပြု. စတင်သူကိုအသုံးပြုသူများသည်ထက်, ရှိသမျှကျော်ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးဒဏ်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။
နမူနာ #3: ပျမ်းမျှအသက် 33.5 - ပြီးသားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနမူနာ3အကြီးဆုံးနမူနာကြီးနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဆင့်မြင့်ပျမ်းမျှ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဒီအသက်အပိုင်းအခြား PIED အစီရင်ခံရန်အရှိဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, နမူနာ3porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆင်းရဲတဲ့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားအင်အားအကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ (-0.37).
Grubbs လည်း erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ porn စွဲရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ရလဒ် porn စွဲကြီးပင်အတော်လေးကျန်းမာ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ထုတ်ဖေါ် သိသိသာသာ ဆက်စပ်သော ဆင်းရဲတဲ့ စိုက်ထူ (-0.20 မှ -0.33)။ အရင်ကဲ့သို့ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်ဆင်းရဲစိုက်ထူအကြား, အင်အားအကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှု (-0.33) Grubbs အကြီးမားဆုံးနမူနာများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED အစီရင်ခံရန်အများဆုံးဖွယ်ရှိပျမ်းမျှအသက်နမူနာများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်: နမူနာ3ပျမ်းမျှအသက်: 33.5 (433 ဘာသာရပ်များ).
ငါဆိုသည်ကားဝံ့သင်မည်သို့မေးဖို့မိနစ်, စောင့်ဆိုင်း သိသိသာသာ related? အဆိုပါ Grubbs လေ့လာမှုစိတ်ချလက်ချဆက်ဆံရေး "သာဖွစျကွောငျးကြေညာပါဘူးအလယ်အလတ်မှအသေး"မကြီးတွေသဘောတူညီမှုရဲ့အဓိပ်ပာယျ? ကျနော်တို့အတွက်စူးစမ်းအဖြစ် ယင်းဝေဖန်မှု, descriptor များကိုများ၏ Grubbs ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုသင်ဖတ်ထားတဲ့အပျေါမှာ Grubbs လေ့လာမှုမူတည်ပြီးသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါ Grubbs လေ့လာမှု ED ဖြစ်စေတဲ့ porn အသုံးပြုမှုအကြောင်းရှိလျှင်, ထို့နောက်အထက်ဂဏန်းတစ်မဖြစ်စလောက်ဆက်စပ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်, မိမိလှည့်ဖျား-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရေး-Up အတွက်ဘေးဖယ်ပစ်လွှတ်လိုက်တယ်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့ Grubbs ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးလေ့လာမှု (ဖွင့်လျှင် "စွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှခံစားစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏"), သူကဘာသာရေးဖြစ်ခြင်း၏အစစ်အမှန်အကြောင်းမရှိခဲ့ကြောင်းတရားကိုဟောပြောသည့်နေရာတွင်" porn စွဲ, "ထို့နောက်ဂဏန်း သေးငယ် ထိုအကို "ကြံ့ခိုင်ဆက်ဆံရေးမျိုး။ " ဖွဲ့စည်းထက်တကယ်တော့စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့် "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ" အကြား Grubbs ရဲ့ "ကြံ့ခိုင်" ဆက်စပ်မှုသာဖြစ်ခဲ့သည် 0.30! သို့သျောလညျးသူကရဲတင်းတဲ့အတွက်ဆောငျကွဉျးပေးဖို့အသုံးပြု porn စွဲလုံးဝအသစ်နှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာ, မော်ဒယ်။ ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်းကျောက်ဝိုင်း, ဆက်စပ်မှုနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို၌တွေ့ကြသည် တစ်ပိုရှည် YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤအပိုင်းကို.
32) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စစ်တမ်း (2019) - ဤလေ့လာမှုတွင်သုတေသီများသည် ED နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုညွှန်းကိန်းများအကြားဆက်စပ်မှုကို“ တုန်လှုပ်စေသော” မေးခွန်းပုံစံဖြင့်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော link မဖွင့်သော်လည်း (သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်မလုပ်မချင်းသူတို့၏“ craving” အတိုင်းအတာကိုတိတိကျကျအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်) အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်နွယ်မှုများပေါ်လာသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
တစ်ခုနီးပါးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 44% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 12% ၏ ED နှုန်းထားများ (27 / 22) သူ ... သူများသည် [ယောက်ျား] (47 / 213) အဲဒီကပို "ပေါ့ပေါ့" အသုံးပြုသူများသည် (≤5x / တပတ်) အတွက်univariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေါ်သို့ရောက်ရှိအရေးပါမှုကို (p= 0.017) ။ ဒါဟာအသံအတိုးအကျယ်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိတစ်ကဏ္ဍမှပါမဖြစ်နိုင်သည်။
... PIED ၏အဆိုပြုထားသောဇီဝကမ္မဗေဒသည်ယုတ္တိတန်သည်ဟုငါထင်ရသည်။ အမျိုးမျိုးသောသုတေသီများအလုပ်လုပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူအမျိုးသားများ၏အစီရင်ခံစာများသည်လည်းအငြင်းပွားမှု၏“ အကြောင်းရင်း” ကိုထောက်ခံသည်။
... ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလေ့လာမှုများသာလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသူများအတွက် ED ကုသခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်ကြား ၀ င်လေ့လာမှုများအပါအ ၀ င်ဖြစ်စေ၊ ဆက်စပ်မှုဖြစ်စေပြtheနာကိုသေချာစွာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည့်နောက်ထပ်လူ ဦး ရေတွင်ဆယ်ကျော်သက်များပါဝင်သည်။ ဂရပ်ဖစ်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုစောစီးစွာထိတွေ့ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်း ၁၃ နှစ်မတိုင်မီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုနှုန်းသုံးဆမြင့်တက်ခဲ့ပြီးယခုအခါ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသည်။
အထက်ပါလေ့လာမှုအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးရဲ့ 2017 အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အဲဒီအကြောင်းဤဆောင်းပါးကိုထံမှအနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက် - လေ့လာမှု porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တို့အကြား link ကိုရှုမြင်:
33) သစ်ခမည်းတော်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: လိင်နီးစပ်ခြင်းကိစ္စများ (2018) - ခေါင်းစဉ်သစ်တစ်ခုဆေးဘက်ကျောင်းစာအုပ်ထဲကနေဒီအခန်း အဖေဘက်က Postnatal စိတ်ရောဂါရောဂါ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏အိမ်ရှင်ကပူးတွဲရေးသားထားသောစာတမ်းတစ်ပုဒ်အား ကိုးကား၍ ဖခင်အသစ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ "ဒီ စာမျက်နှာသက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်၏ screenshots များပါရှိသည် အခန်းကနေ။
34) ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019) အကြီးစားလေ့လာမှု (n = ၆၄၆၃) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမကောလိပ်ကျောင်းသားများ (အလယ်အလတ်အသက် ၂၂ နှစ်) တွင်လိင်အရစွဲလမ်းမှုမြင့်မားခြင်း (၁၅%)၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်)၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများကိုတင်ပြသည်။ သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလည်းအကြံပြု အစောပိုင်းကထိတွေ့မှုပိုရှည်ဆွနှင့်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းစားသုံးသည့်အခါအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့ရန်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လိုအပ်သဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အလားအလာ desensitization နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအတွက်ခြုံငုံကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ...
အဆိုပါထိတွေ့မှုအချိန်ကာလ၏သင်တန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်: လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ (46.0%) ကိုက်ညီနှင့်ပိုပြီးသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းပစ္စည်းများအသုံးပြုမှု, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း (60.9%) ၏ဝတ္ထုအမျိုးအစားမှ switching အစွန်းရောက် (အကြမ်းဖက်) ပစ္စည်း (32.0%) ...
35) ဆွီဒင် 2017 (2019) တွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများ - အဆိုပါဆွီဒင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များကတစ်ဦးက 2017 စစ်တမ်းညစ်ညမ်းအပေါ်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းအပိုင်းတစ်ခုပါရှိသည်။ ဤနေရာတွင်သက်ဆိုင်ရာ, သာ. ကြီးမြတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆက်စပ်ခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
သူတို့တစ်တွေနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နီးပါးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်းလောင်ဆိုလိုသည်မှာ 16 မှ 29 အသက်ယောက်ျား၏လေးဆယ်တစ်ရာခိုင်နှုန်း, ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများကိုဖြစ်ကြသည်။ အမြိုးသမီးမြားအကြားသက်ဆိုင်ရာရာခိုင်နှုန်းကို3ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကိုလည်းမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ကိုပြသ အရောင်းအဝယ်လိင်နှင့်တစ်ဦးပေါင်းသင်းမှု, သိပ်မြင့်မားသောတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူမကျေနပ်မှု။ ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်စေတော်မမူကြောင်းလူဦးရေသည်ပြည်နယ်၏နီးပါးတဝက်, အဲဒါကိုသာသက်ရောက်သည်သို့မဟုတ်မပါလျှင်တတိယအနေဖြင့်မသိရပါဘူး။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာပုံမှန်နိမ့်ပညာရေးနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်အတူလူတို့တွင်ပိုပြီးအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအကြား link ကိုပိုပြီးအသိပညာများအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ အရေးပါသောကြိုတင်ကာကွယ်အပိုင်းအစယောက်ျားလေးများနှင့်လုလင်တို့နှင့်အတူညစ်ညမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကျောင်းဒီလိုလုပ်ဖို့သဘာဝနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
36) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: စွဲမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်? (2019) - အခန်း၏ PDF ဖိုင်သို့ချိတ်ဆက်ပါ Psychosexual ဆေးပညာမှနိဒါန်း (2019) - အဖြူ, ကက်သရင်း။ "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: စွဲမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ Psychosexual ဆေးပညာမှနိဒါန်း? " (2019)
37) Abstinence သို့မဟုတ်လက်ခံ? ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Addressing အနေနဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးနှင့်အတူယောက်ျားရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး (2019) - စာရွက်တွင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲကပ်နေသည့်အမျိုးသားခြောက် ဦး အားသတိထားခြင်းအပေါ်အခြေခံသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ် (တရားအားထုတ်ရန်၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းများနှင့်အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများ) ကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ဘာသာရပ် (၆) ခုစလုံးသည်တရားထိုင်ခြင်းမှအကျိုးရပုံရသည်။ လေ့လာမှုများ၏ဤစာရင်းနှင့်အညီ,6၏ 2, porn - သွေးဆောင် ED ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သောအစီရင်ခံစာအသုံးပြုမှု (လေ့) ၏တိုးပွားလာ။ တစ်ခုမှာဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။ PIED ကိုအစီရင်ခံသည့်အမှုများမှကောက်နုတ်ချက်များ။
Pedro (အသက် 35):
Pedro တစ်ကညာအဖြစ် Self-သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Pedro သူမိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးမှာမိမိအတိတ်ကြိုးစားမှုနှင့်အတူကြုံတွေ့အရှက်ကွဲခြင်း၏ခံစားခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ပြောဆိုသော။ သူ၏မကြာသေးမီကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုသည်သူ၏ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသူ့ကိုစိုက်ထူခြင်းမှတားဆီးသည့်အခါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်စွပ်စွဲခဲ့သည်။
Pedro လေ့လာမှုနှင့်ခံစားချက်တစ်ခုခြုံငုံတိုးတက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလက္ခဏာများ၏အဆုံးအားဖြင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကြောင့်အလုပ်ကဖိစီးမှုကာလအတွင်းကသူ့ Anti-စိုးရိမ်စိတ်ဆေးတစျဦး၏သောက်သုံးသောတိုးပွားလာနေသော်လည်းသူဖြစ်သောကြောင့်တည်ငြိမ်ခြင်း, အာရုံ, သူသည်အသီးအသီး session တစ်ခုအပြီးတွင်တွေ့ကြုံအပန်းဖြေ၏ Self-အစီရင်ခံအကျိုးကျေးဇူးများတှေးတောဆငျခွဆက်လက်သွားမည်ဟုဆိုသည်။
ပါပလော (အသက် 29):
ပါပလောသူသည်မိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကျော်မျှမထိန်းချုပ်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါတယ်ခံစားရတယ်။ ပါပလောညစ်ညမ်းအပေါ် ruminating နေ့တိုင်းနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်, ဖြစ်စေတက်ကြွစွာညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်သူသည်အခြားအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာအလုပ်များအခါနောက်တစ်နေ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်စေ့စပ်နေစဉ်။ ပါပလောကိုသူတွေ့ကြုံခဲ့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူဆရာဝန်တစ်ဦးထံသို့ ဝင်. , မိမိဆရာဝန်ကသူ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထုတ်ဖော်သော်လည်း, Pablo အစားသူ testosterone ဟော်မုန်း၏ရိုက်ချက်များပေးထားခဲ့သည်ဘယ်မှာအထီးကလေးမွေးဖွားအထူးကုရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ ပါပလောမျှအကျိုးကျေးဇူးရှိခြင်းအဖြစ် testosterone ဟော်မုန်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သို့မဟုတ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအသုံးဝင်မှုကို၎င်း, အနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံကိုမိမိအညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူမည်သည့်နောက်ထပ်အကူအညီတောင်းထွက်ရောက်ရှိရာမှသူ့ကိုတားဆီး။ pre-လေ့လာမှုအင်တာဗျူးပါပလော, မိမိညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းဘယ်သူ့ကိုမှနှင့်အတူပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစကားပွောနိုင်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
39) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းကသုတ်ရည်လွှတ်ချိန်ကိုထိခိုက်နိုင်သလား။ (၂၀၂၀) - ပိုမိုကြီးမားသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်“ နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း” (လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်အခက်အခဲ) တို့အကြားခိုင်မာသည့်ဆက်နွယ်မှုကိုအစီရင်ခံသည့်ကြီးမားသောလေ့လာမှု။ လေ့လာမှုမှကောက်နုတ်ချက်များ & စားပွဲ:
နေရာအနှံ့အပြားတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုကြောင့်ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသည်ညစ်ညမ်းသောစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် (၄) ပတ်ကလိင်မှုကိစ္စပြုခဲ့သည့်အမျိုးသားများအားမိတ်ဖက်နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကြာရှည်စွာခံစားရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအဖြေများမှ ရွေးချယ်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ အကြိမ်တစ်ဝက်၊ အကြိမ်တစ်ဝက်၊ အကြိမ်အများစုသို့မဟုတ်အကြိမ်များစွာမည်သည့်အခါမျှမပြုလုပ်ပါနှင့်။ တစ်ပတ်မှာတစ်မိနစ်၊ တစ်ခေါက်လောက်ညစ်ညမ်းတဲ့အချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီး၊ ညစ်ညမ်းမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအချိန်ကွဲပြားမှုရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့တယ်။ အမျိုးသား ၃,၀၃၃ ဦး သည်မေးခွန်းလွှာကိုဖြေဆိုခဲ့ပြီး ၆၈၇ ဦး (၂၂.၇%) သည်ပြီးခဲ့သည့် (၄) ပတ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခဲ့ခြင်းနှင့်ယောက်ျား ၁၅ ဦး တွင်အချက်အလက်များပျောက်ဆုံးနေခြင်းကြောင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ စုစုပေါင်းအသက် (၃၁) နှစ်အရွယ်ပျမ်းမျှအသက် (၃၁) နှစ်ရှိအမျိုးသား ၂၃၃၁ ဦး (၇၆.၉%) ကိုစာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုအတွက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးလေးပတ်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အကြားညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်နည်းလမ်းနှင့်နည်းလမ်းများ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုဇယား ၁ တွင်ပြထားသည်။
အဆိုပါ Kruksal-Wallis H ကိုစမ်းသပ်ပြသခဲ့သည် တုန့်ပြန်မှုအမျိုးအစားများအကြားအမြဲတစေသုတ်ရည်လွှတ်မှုပြhavingနာရှိသူများနှင့်порноကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပိုမိုကြာရှည်ခြင်းနှင့်အတူဤခံစားချက်ကိုတစ်ခါမျှမခံစားဖူးသူ၊ ယောက်ျားများတွင်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားရခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရန်အပတ်စဉ်အချိန်ရခြင်းတို့သည်အမျိုးသားများတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မိတ်ဖက်နှင့်အတူသန္ဓေတည်ခြင်းအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသားများသည်ဤခံစားချက်ရှိအမျိုးသားများထက်တစ်ပတ်လျှင်အညိုရောင်သို့အချိန်ပိုမိုသိသိသာသာ masturbate; ဘယ်တော့မှ, less- သို့မဟုတ်ကြိမ်၏ထက်ဝက်။
40) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အသုံးပြုသူများအတွေ့အကြုံအားလေ့လာခြင်း - အရည်အသွေးလေ့လာမှု (၂၀၂၀) - သက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ။
ပါ ၀ င်သူများက IP တွင်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုခံစားရသည့်လက္ခဏာများတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ စွဲလမ်းခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို“ စုပ်ယူ” နှင့်“ အလေ့အထ” တို့ကိုမှီခိုအားထားလေ့ရှိသည်။ ပါဝင်သူများအနေဖြင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောစွဲလမ်းစေသောရောဂါများနှင့်ကိုက်ညီသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ IP အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်း, အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအိုင်ပီအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သော IP ပုံစံများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်…
အရှိန်မြင့်တက်ခြင်းကိုမကြာခဏဆိုသလို IP ကိုအချိန်ပိုပေးသည်သို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတူညီသော“ မြင့်မားသော” အရာများကိုခံစားနိုင်ရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဟုဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဤသင်တန်းသားက“ ပထမတော့ငါအတော်လေးပျော့ညံ့တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့တယ်၊ ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါငါကပိုပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့၊
သင်တန်းသားများကိုအချို့အတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုမြင့်မားလည်း Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နောက်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ၊ အချိန်ကုန်လွန်ပြီးနောက်မည်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမျှမထုထည်ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း (သို့) လက်တွေ့ဘ ၀ မိတ်ဖက်များနှင့်စိုက်ထူခြင်းကိုရရှိရန်မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်းဟုယူမှတ်ထားသော erectile dysfunction ကဲ့သို့သောရောဂါများကိုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ “ ငါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မထနိုင်ဘူး။ ငါလုပ်ခဲ့ရင်တောင်သိပ်မကြာပါဘူး။ ဤလက္ခဏာများကိုသင်တန်းသားများကမကြာခဏညည်းညူလေ့ရှိသည်။ အကြိမ်များစွာ! ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမရပ်နိုင်ဘူး ပြောရလောက်ပြီ
41) EAU 2020: ပိုဆိုးသော၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့် Erectile Function (၂၀၂၀)
လာမည့်လေ့လာမှုဖော်ပြညီလာခံစိတ္တဇ။ ကောက်နှုတ်ချက်အနည်းငယ် -
ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဒိန်းမတ်နှင့်ယူကေတို့မှသုတေသီများသည်အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် www.malesexualhealth.beလူမှုရေးမီဒီယာ၊ ပိုစတာများနှင့်လက်ကမ်းကြော်ငြာများမှတဆင့်ကြော်ငြာများကိုဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ဒိန်းမတ်အမျိုးသားများအဓိကအားဖြင့်ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ယောက်ျားပေါင်း ၃၂၆၇ ဦး သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ မေးခွန်း ၁၁၈ ခုကိုဖြေကြားခဲ့သည်။ မေးခွန်းလွှာသည်ပြီးခဲ့သည့် ၄ ပတ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့်အမျိုးသားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပြီးလိင်မှုကိစ္စလှုပ်ရှားမှုအပေါ် porn ကြည့်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသင်းအားပြောပြစေခဲ့သည်။ မေးခွန်းလွှာတွင်ပုံမှန် erectile လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းများမှမေးခွန်းများပါဝင်သည် (မှတ်စုများကိုကြည့်ပါ) ။
အကြီးအကဲသုတေသီ, ပါမောက္ခ Gunter က de ဝင်း (Antwerp တက္ကသိုလ်နှင့် University Hospital Antwerp) က
"ကျနော်တို့ကတုံ့ပြန်မှုကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးရှိကွောငျးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာမှာအမျိုးသားတွေကအများအားဖြင့်တစ်ပတ်ကိုပျမ်းမျှမိနစ် ၇၀ ခန့်၊ အတော်များများကတစ်မိနစ်လျှင် ၅ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြည့်ပြီးအချို့သည်အနည်းငယ်သာကြည့်နေကြပြီးအချို့ကမူများစွာကြည့်နေကြသည်။ ”
စစ်တမ်းကောက်ယူချက်အရအသက် ၃၅ နှစ်အောက်အမျိုးသား ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင် Erectile dysfunction အချို့ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
“ ဒီကိန်းဂဏန်းကကျနော်တို့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုများတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရမှတ်များအရလိင်တူချစ်သူနှင့်အတူ erectile လုပ်ဆောင်မှုတွင်အခက်အခဲများပိုမိုများပြားလာခြင်းတို့အကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများလည်းညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုအမြင့်ဆုံးတွင်ရှိသည်။
ဒီအလုပ်ကဘာကိုဆိုလိုသလဲ၊ ၎င်းသည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုထက်မေးခွန်းလွှာဖြစ်ပြီး၎င်းအားတုန့်ပြန်ဖြေကြားသူများသည်အမျိုးသားလူ ဦး ရေ၏လုံးဝကိုယ်စားပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဤအလုပ်ကို porn နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားမည်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုမှမဖော်ထုတ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးနမူနာအရွယ်အစားကြီးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တော်တော်လေးယုံကြည်မှုရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၉၀% သောယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်လျင်မြန်စွာရှေ့သို့တက်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စကိုလိင်ရှုထောင့်မှရှုမြင်ပုံသည်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းတွင်အမျိုးသား ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာလိင်တူချင်းဆက်ဆံသူသည်လိင်မှုကိစ္စကိုကြည့်ခြင်းထက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ၂၀% သည်ယခင်ကကဲ့သို့တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာအဆင့်ကိုရရှိရန်ပိုမိုအစွန်းရောက်သော porn ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြproblemsနာများသည်ဤနှိုးဆွမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအပေါ်အလားတူလေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်ဤသုတေသနတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ထပ်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ erectile disfunction နှင့်ပတ်သက်သောဆရာဝန်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းအားလည်းမေးမြန်းသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
မှတ်ချက်ပေးခြင်းပါမောက္ခ Maarten Albersen (ဘယ်လ်ဂျီယံ Leuven တက္ကသိုလ်) ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီဟာပါမောက္ခဒီဝင်းနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုပါ။ လူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ပိုစတာများမှတစ်ဆင့်စုဆောင်းထားသောလူငယ်များပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုနှုန်းထားများသုံးစွဲမှုနှုန်းကို ဦး တည်။ ဘက်လိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အားလုံးလေ့လာခြင်းသည်အမျိုးသားများမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစားသုံးခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုအားနည်းစေနိုင်သည်။ ပါမောက္ခဒီဝင်းပြောသည့်အတိုင်းအရှိန်မြှင့်နေသောယူဆချက်မှာအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသည့်အမျိုးအစားသည်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပေါ်ထွက်လာနိုင်ပြီးမိတ်ဖက်လိင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကဲ့သို့သောနှိုးဆွမှုအဆင့်သို့ ဦး တည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါလေ့လာမှုသည်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရာတွင်အကူအညီအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပါမောက္ခ Albersen ဤအလုပ်တွင်မပါခဲ့, ဒီလွတ်လပ်သောမှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
42) လာမည့်လေ့လာမှုများဖော်ပြဟောပြောခြင်း - Urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌတို့က - အဆိုပါဟောပြောပွဲ longitudinal နှင့် Cross- အပိုင်းလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုပါရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အထက်တန်းကျောင်းသားဆယ်ကျော်သက်များ (စာမျက်နှာ ၅၂-၅၃) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းနှစ်ဆတိုးခဲ့ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျမှုမှာ ၆၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
Foresta သည်သူ၏လာမည့်လေ့လာမှုကိုလည်းဖော်ပြသည်။ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် "လိင်မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒနမူနာသစ်ပုံစံများ 125 ငယ်ရွယ်အထီး, 19-25 နှစ်ပေါင်း"၎င်း၏အီတလီနာမည်"Sessualità mediatica အီး nuove Form di patologia sessuale Campione 125 giovani maschi“ လေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှုမှရလဒ်များ (စာမျက်နှာ ၇၇-၇၈) Erectile ရာထူးအမည်မေးခွန်းလွှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း, ကြောင်း r ကိုတွေ့ရှိရegular porn အသုံးပြုသူများ erectile functioning ဒိုမိန်း၏အောက်ပိုင်း 50% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဒိုမိန်းပေါ်တွင်အနိမ့်နှင့် 30% သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
၄၃) MedHelp ဆောင်းပါး (ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိပါ) ဤတွင်ပါ MedHelp အပေါ် posted မှတ်ချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းကိုဆောင်းပါး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရည်မှတ်။ အဘယ်အရာကိုထိတ်လန်ရဲ့အကူအညီတောငျးလူ 58% 24 သို့မဟုတ်အငယ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတော်များများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မသင်္ကာ လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ -
Jim PFAUS -“ထောက်ခံသူတွေကိုဒီပုံစံ porn ဦးနှောက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် dopamine လွှတ်ရာမှစွဲရရှိကာထိန်းအကွပ်မဲ့လှုံ့ဆော်မှုသောစိတ်ကူးမှ wedded နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်အရ, dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စေသောဘာမှစွဲလမ်းဖြစ်ပါသည်"
RESPONSE: Pfaus အားဖြင့်တစ် ဦး ကမှားယွင်းသောကြေညာချက်။ ဟုတ်ပါတယ်၊dopamine လွှတ်ပေးရန်စွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေသောဘာမှ“ ငါထင်တာကတော့ Pfaus ကလိင်မှုကိစ္စဟာထူးခြားတဲ့သဘာဝဆုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသုတေသီတွေအားလုံးသိတယ်။ လိင်မှုကိစ္စသည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရှိသောနျူကလိယ accopens dopamine ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ endogenous opioids ကိုလည်းအလားတူပင်။ တကယ်တော့၊ Pfaus သည်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းသည်နေရာဒေသကို ဦး စားပေးမှု (CPP) ကို ဦး တည်ကြောင်းဖော်ပြသည့်လေ့လာမှုများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၀ တ္ထုများ၏စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန် CPP ကိုအသုံးပြုသည်။ ကြွက်များအပေါ်လေ့လာမှုများကလိင်သည်၎င်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောထူးခြားသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် တူညီတဲ့ဆုလာဘ် system ကိုအာရုံခံ ထိုကဲ့သို့သော meth အဖြစ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, တခြားသဘာဝဆုလာဘ် (အစားအစာ, ရေ) ကိုသာလိင် / စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအာရုံခံနှင့်အတူ 10-20% ထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ငါလိင်လှုပ်ရှားမှု၏ neurobiology နှင့်အတူ sensitization ၏ neurobiology နှင့်စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအောက်ပါလေ့လာမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ (စကားမစပ်အာရုံကိုစွဲစွဲလမ်းမှုတွင်ပါဝင်သောအဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးစိတ်လှုံ့ဆော်မှုသီအိုရီမှအဆိုပြုထားသည်။ ) "သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု Key ကိုအာမခံ (2013) အဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်ဥပဒေ“ နိဂုံးချုပ်မှကောက်နုတ်ချက်
"ထို့ကြောင့်သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများသည်တူညီသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပေါင်းစည်းရုံမျှမက၎င်းတို့သည် tphe တူညီသောမော်လီကျူးဖျန်ဖြေသူများအပေါ်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်နျူကလိယရှိတူညီသောအာရုံခံဆဲလ်များ၌မက်လုံးများလွန်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုလုံး၏" လိုလားခြင်း "ကိုလွှမ်းမိုးရန်အလားအလာရှိသည်။ "
Jim PFAUS -“ဥပမာ, လိင်စွဲစက်မှုလုပ်ငန်း၏အကြံပြုချက်ကိုထောက်ခံအားပေးသူများသည်နှင့်အညီ, အကိုပိုမိုညစ်ညမ်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုချောင်းမြောင်းပိုသူတို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ "
RESPONSE: မဟုတ်ဘူး။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးအတွက်လေ့လာမှုများတွင်၎င်းကိုတည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်သည်။1, 2, 3) နှင့်အင်တာနက် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစွဲထိုလက္ခဏာများသည်“ နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်း” နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ လက်ရှိနာရီကိုသာအသုံးပြုမည့်အစား၊ ပေါင်းစပ်ထားသော variable များသည် porn-induced ED နှင့်အကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် -
ဒီဖြစ်စဉ်သုတေသနပြုဖို့ပိုကောင်းလမ်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားရလဒ်ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသုတေသနအနက်ကိုဖွင့်လှစ်ဆက်စပ်မှုအစား causation ဖော်ပြသည်။ အကြှနျုပျ၏ site ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် porn ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့သူတထောင်အနည်းငယ်ယောက်ျား။
Jim PFAUS: "သို့သော် ငါ၏အမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု နှင့် နီကိုးလ် Prause, UCLA မှာ psychophysiologist နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကြောင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်င်ပြသခဲ့သည်။ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ထောက်ခံသူတွေကို porn ပမာဏကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ပတျသကျဖို့အမြန်နေမြဲနေစဉ်ကသူ၏လိင်တံဖြစ်ပါတယ် desensitized ဘယ်လိုမှကြည့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု porn ၏ကြီးမားသောပမာဏစောင့်ကြည့်လျော့နည်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုမှယောက်ျားကပိုအထိခိုက်မခံစေပြသခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်လူတို့သညျထက် Lab ထဲမှာညစ်ညမ်းကြည့်နေစဉ်ရိုးရှင်းစွာအ ထား. , အိမ်မှာသူကိုမှန်မှန်စောင့်ကြည့် porn ယောက်ျားကပိုနှိုးဆွပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကစောင့်ကြည့်ခံနေရသည့်ညစ်ညမ်း (ကျွန်ခံကဲ့သို့အအမာခံလိင်ပြုမူသောအမှုအခမဲ့ဆိုလိုသည်မှာ) "vanilla" ခဲ့လျှင်ပင်မြန်ဆန်စိုက်ထူရနိုင်ခဲ့ကြတယ်နှင့်မျှမနှောင့်ရှက်သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းခဲ့။ "
RESPONSE: ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ယင်း၏တောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့မပြုခဲ့: ငါဒေါက်တာ Isenberg ရဲ့ဝေဖန်မှုမှငါ့မှတ်ချက်များနှင့်ကောက်နှုတ်ချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရစ်ချတ် Isenberg, MD နဲ့တစ်ဦးအလွန်ကျယ်ပြန့် Lay ဝေဖန်မှုအားဖြင့်တရားဝင်ဝေဖန်မှုပေး:
ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 ED နှင့်အတူယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာမှာအားလုံးလေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒီအစား, Prause သူမ၏အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြေရှင်းပေးသောအဘယ်သူအားမျှလေးကနေဒေတာတွေကိုစုရုံးရန်ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက် data တွေကိုစက္ကူအခြေစိုက်ခံရဖို့အခိုင်အမာထားတဲ့အပေါ်အခြေခံလေးလေ့လာမှုများအတွက် data တွေကိုမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူးအဖြစ်နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နေဖြင့်ဤစာတမ်း peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လွန်ကြောင်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါကှာဟအသေးစားကွာဟချက်မဟုတ်, ပလပ်မရနိုငျသောတွင်း gaping ။ ထို့အပြင်စက္ကူအတုအယောငျဒါမှမဟုတျသူတို့ရဲ့ဒေတာကမထောက်ပံ့ခဲ့ကြကြောင်းအတော်ကြာတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျနော်တို့နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မမှန်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူစတင်။ ဒီလေ့လာမှုအကြောင်းကိုအတော်များများဂျာနယ်လစ် '' ဆောင်းပါးတွေကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှဦးဆောင်ကြောင်းပြောဆိုထားသည် ပိုကောင်း စိုက်ထူ, သေးသောစက္ကူကိုတွေ့သောအရာကိုမဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတင်အင်တာဗျူးမှာတော့နီကိုးလ် Prause နဲ့ Jim Pfaus နှစ်ဦးစလုံးမဟုတ်မမှန်သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိုက်ထူတိုင်းတာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်နှင့် porn ကိုသုံးသူယောက်ျားပိုကောင်းစိုက်ထူခဲ့။ ထဲမှာ ဂျင်မ် Pfaus တီဗီအင်တာဗျူး Pfaus ကဤသို့ဆို၏:
ကျနော်တို့ Lab ထဲမှာတစ်ခုစိုက်ထူရဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များ၏ဆက်စပ်မှုမှာကြည့်ရှုကြ၏။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့အိမ်မှာကြည့်ရှုအားပေး porn ၏ပမာဏနှင့်အတူတစ်ကှနျ့ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်ဥပမာသူတို့အနေနဲ့စိုက်ထူရသော latency ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
ပိုကလူကိုသူတို့လျှော့မ Lab ထဲမှာအားကောင်း erectile တုံ့ပြန်မှုရှိသည်အိမ်မှာ erotica စောင့်နေကြလော့။
သို့သျောလညျးဤစာတမ်းတွင်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဘူး "စိုက်ထူ၏မြန်နှုန်း။ " သာအဆိုပါစက္ကူ ပြောဆိုထားသည် ခေတ္တမျှ porn (နှင့်ဒီရိုးရှင်းတဲ့ Self-အစီရင်ခံစာတောင်မှအားလုံးဘာသာရပ်များ၏ဟုမေးသောအခြေခံစာတမ်းများကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးင်) ကြည့်ရှုပြီးနောက်သူတို့၏ "arousal" တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုမှယောက်ျားတွေဟုမေးကြ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စက္ကူသူ့ဟာသူနေကောက်နုတ်ချက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်:
အဘယ်သူမျှမဇီဝကမ္မလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန် data တွေကိုယောက်ျားရဲ့ Self-အစီရင်ခံအတွေ့အကြုံကို "ကိုထောကျပံ့ဖို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်
တတိယကလက်ခံပြောဆိုချက်ကို: Editor ကို (အထက်ချိတ်ဆက်) မှဒေါက်တာ Isenberg ရဲ့ပေးစာအတွက်အားနည်းချက်တွေကိုမီးမောင်းထိုးပြမျိုးစုံထိရောက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများပြင်းလာရသော ချီးကျူးခြင်း & Pfaus ဒါကြောင့်အဘို့အဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အံ့ဩ ချီးကျူးခြင်း & Pfaus လာသောအခါသုံးကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' arousal အဆင့်ဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများအတွက်4အခြေခံလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများတစ်3မိနစ်ရုပ်ရှင်, တဦးတည်းလေ့လာမှုတစ်ခု 20-ဒုတိယရုပ်ရှင်အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုအသုံးပြုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာမြဲမြံစွာတည်င့် ရုပ်ရှင် ပို. arousal ဓာတ်ပုံများထက်များမှာဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမတရားဝင်သုတေသနအဖွဲ့ကအုပ်စုတစ်စုကဤဘာသာရပ်များအတူတကွသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. တောင်းဆိုမှုများလုပ်လိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုထိတ်လန်င်သူတို့ရဲ့စက္ကူစာရေးဆရာများအတွက် Prause နှင့် Pfaus ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်အားလုံး4လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တောင်းဆိုကြောင်းဖြစ်ပါသည်:
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Prause ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံလေ့လာမှုများမှာဖျောပွထားပါကဤကြေညာချက်, မှားယွင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Prause နှင့် Pfaus သူတို့ရဲ့စက္ကူအကဲဖြတ်ကြောင်းဆိုကြသည်မရဘူးဘာဖြစ်လို့ပထမဦးဆုံးအကြောင်းပြချက်က "arousal ။ " သင်အားလုံးဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တူညီသောစီးပွားရေးနှိုးဆွအသုံးပြုရမည်။
တစ်ဦးကစတုတ္ထမထောက်ပံ့ပြောဆိုချက်ကို: ဒေါက်တာ Isenberg လည်းဘယ်လိုမေးလျှင်, ချီးကျူးခြင်း & Pfaus 2015 သည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ '' arousal အဆင့်ဆင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင် သာ 1 တစ်အသုံးပြုသော4အခြေခံလေ့လာမှု 1 စကေးမှ9။ တဦးတည်းတဦးတည်း0စကေးတစ်ခု7အသုံးပြုသောနှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုလိင်စိတ်နိုးထ ratings သတင်းပို့ကြဘူး, 1 စကေးတစ်ခု7ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်တကြိမ် Prause နှင့် Pfaus နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဆိုကြသည်:
အခြေခံစာတမ်းများကိုပြအဖြစ်ဤကြေညာချက်လွန်း, မမှန်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Prause နှင့် Pfaus သူတို့ရဲ့စက္ကူယောက်ျားများတွင် "arousal" ratings အကဲဖြတ်ကြောင်းဆိုကြသည်မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလေ့လာမှုဘာသာရပ်များ '' ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တူညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးအသုံးပြုရမည်။ porn အသုံးပြုမှုတိုးတက်မှုစိုက်ထူသို့မဟုတ် arousal, ဒါမှမဟုတ်တခြားဘာမှအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အပေါငျးတို့သ Prause-generated ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြ၏ သူမ၏သုတေသနများကမထောက်ပံ့.
စာရေးဆရာများ Prause နှင့် Pfaus လည်းသူတို့ erectile လည်ပတ်ရမှတ်များနှင့်ပြီးခဲ့သည့်လ၌ကြည့်ရှုအားပေး porn ၏ပမာဏအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ပြောဆိုထားသည်။ ဒေါက်တာ Isenberg ထောက်ပြအဖြစ်:
ပို. ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်အဆိုပါ erectile function ကိုရလဒ်ကိုအတိုင်းအတာအဘို့အစာရင်းအင်းတွေ့ရှိချက်များ၏စုစုပေါင်းပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သမျှဘယ်သူမျှမကစာရင်းအင်းရလဒ်များကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အစားစာရေးဆရာများရိုးရှင်းစွာကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း၏နာရီနှင့် erectile function ကိုအကြားအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့ရှိကွောငျးကိုသူတို့ရဲ့ unsubstantiated ကြေညာချက်ယုံကြည်ဖို့စာဖတ်သူကိုမေးပါ။ တစ်ဖက်နှင့်အတူ erectile function ကိုအမှန်တကယ်စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏မရှိခြင်းအများဆုံးကွာဟဖြစ်ပါတယ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်တိုးတက်စေခြင်းငှါစာရေးသူ '' ပဋိပက္ခဖြစ်အခိုင်အမာပေးတော်မူ၏။
လေ့လာမှုတစ်ခု၏အရေးပါသောစာတစ်စောင်ထုတ်ဝေသောအခါဓလေ့ထုံးတမ်းသည်အတိုင်း, လေ့လာမှုရဲ့စာရေးဆရာများတုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့ကြသည်။ Prause ရဲ့ဟန်ဆောင်တုံ့ပြန်မှု "ဆိုတဲ့အနီရောင် Herring: Hook, လိုင်းနှင့် Stinker"Isenberg ရဲ့ရမှတ် evades (နှင့်မသာ ဂါယူဆပါသည်ရဲ့), ဒါကြောင့်အများအပြားပါဝင်ပါသည် အသစ် မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်းနှင့်အတော်ကြာလင်းမြင်သာမှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်။ တကယ်တော့, Prause ရဲ့ပြန်ကြားချက်မီးခိုး, ကြေးမုံ, အခြေအမြစ်ကဲ့ရဲ့နှင့်အမှားကိုအမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။ ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်ဤသည်ကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုသည်အဘယ်အရာကိုများအတွက် Prause နှင့် Pfaus တုံ့ပြန်မှုဖျောထုတျ: Prause & Pfaus ကိုဝေဖန်မှု တုံ့ပြန်ချက် ရစ်ချတ် Isenberg ရဲ့စာမှ.
အနှစ်ချုပ်: Klein / Kohut / Prause ဖွငျ့အဆိုပါ2core ကိုတောင်းဆိုမှုများကလက်ခံရှိနေဆဲ:
ချီးကျူးခြင်း & Pfaus porn အသုံးပြုမှုတစ်ခုစိုက်ထူမေးခွန်းလွှာ (IIEF) အပေါ်ရမှတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မခံခဲ့ရကြောင်း၎င်း၏အမာခံအရေးဆိုမှုဒေတာများကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
အခြေခံလေ့လာမှု (၄) သည်ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုများ (ရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများ) ကိုအသုံးပြုသောအခါစာရေးသူများက“ နှိုးဆွခြင်း” ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာအကဲဖြတ်နိုင်ပုံကိုရှင်းပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် (Prause & Pfaus) (4-1, 7-1, 9) -0 မရှိစကေး) ။
Prause နှင့် Pfaus အထက်ပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှအဖြေကိုရှိခဲ့ပါလျှင်, သူတို့ကဒေါက်တာ Isenberg ၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုမှာသူတို့ကိုထားကြပြီမယ်။ သူတို့ကမရကိုပြု၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျင်မ် Pfaus ၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ဂျာနယ်အီးနှင့်သုံးစွဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုတိုက်ခိုက်နေ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏အယူအဆ။ co-စာရေးဆရာ နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်တော်မူပြီးမှ, PIED debunking နှင့်အတူစွဲလမ်းနေသည် ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်ဆန့်ကျင်3နှစ်စစ်, တစ်ပြိုင်နက် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူလူပျိုတို့နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် libeling နေစဉ်။ ကြည့်ရှုပါ: ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9.
တနည်းကား, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, ယုံကြည်မှုစွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။
ထိုသို့ Prause (မှတ်သားထားရပါမည်နှင့် ရံဖန်ရံခါ Pfaus) ပစ်မှတ်ထားနှောင့်ယှက်, အသရေဖျက်မှုနှင့်ဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံ။ မြင် ဒီစာမျက်နှာ ၎င်းသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော“ astroturf” လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် UCLA သုတေသီနီကိုးလ်ပရာ့စ်၏အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဖန်တီးခဲ့သည်။
အဆိုပါ Pfaus ဆောင်းပါးအောက်မှာ comments:
by ချားလ်စ် Samenow၏, MD MPH, အယ်ဒီတာ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive: ကုသမှု၏ဂျာနယ်နှင့်ကာကွယ်ရေး:
ဒါဟာသင်လိုက်ဖို့တိသောအရာတို့ကိုကိုးကားခြင်းဖြင့်မည်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရမဖကျြဆီးတဲ့အရှက်ကွဲခြင်းပါပဲ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive ၏အယ်ဒီတာအဖြစ် ( ... ခေါင်းစဉ်ကဤရောဂါမှကျယ်ပြန့်ချဉ်းကပ်မှုလည်းပါဝင်သည် ... ကျနော်တို့စသည်တို့ hypersexuality, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပါအဝင်မတူညီသောမော်ဒယ်များအပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်းပါးများထုတ်ဝေဆက်လက်သတိပြုပါ) ကျွန်မလုံခြုံစွာ #1 ပြောနိုင်တယ်) ကြှနျုပျတို့အသုံးပွုရ ပြင်ပသုံးသပ်သူများလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နှင့် 2) ကြှနျုပျတို့၏အနိမ့်သက်ရောက်မှုအချက်အဓိကအားကြောင့်နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ကြောင့်အလွန်နိမ့်ငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်လှည့်ပတ်မှုနှုန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်သည့်ဧရိယာ၌သုတေသန၏ရှားပါးမှုအခက်အခဲမှနီးပါးမျှတင်ပြလက်ခံရရှိသည့်အချက်ကိုမှဖြစ်ခဲ့သည်။ သက်ရောက်မှုအချက်ကားအညွှန်းအရေအတွက့်ဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယခင်ကဂျာနယ်ထဲမှာဆာပသူသည်ဒါဝိဒ် Delmonico, အမှန်တကယ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်လှုပ်ရှားမှုရန်တွဲဖက်အယ်ဒီတာအနေအထားမှဆင်းအရှိန်မြှသိရသည်။ ဒါကြောင့်သူက Self-မြှင့်တင်ကြောင်းသင့်ရဲ့အရိပ်အမြွက်သာမမှန်ကန်ကြောင်းပေမယ့်အတော်လေးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြသည်။ သုတေသန / ​​သိပ္ပံ (သို့မဟုတ် သိ. ကင်းမဲ့) အောက်ပါအပေါ်သူ၏တပြင်လုံးကိုဝေဖန်မှု bases သူစာရေးဆရာအဖြစ်သင်ပထမဦးဆုံးမိမိအအချက်အလက်များစစ်ဆေးငါ့ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများထံအရောက်သွားရှိသူ၏ကြောင့်လုံ့လဝီရိယမလုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းအတော်လေးမထင်မှတ်။ မဆိုအယ်ဒီတာအဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ခါးပန်းကိုတဦးတည်းကအမြဲတမ်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဆန္ဒရှိနေကြသည်, ဝေစုများနှင့်ပွင့်လင်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လော့။ သငျသညျဖြစ်ပါသလား
မှရေးသား ဖရက်ဒရစ် Toates:
အောက်ပါမှတ်ချက်များကိုမကြာသေးမီကစာအုပ်၏စာရေးသူသူအငြိမ်းစားဗြိတိန်ပါမောက္ခ (ဖရက်ဒရစ် Toates) ကရေးသားခဲ့ကြ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အလုပ်လုပ်ဘယ်လို: ။ ထူးခြားတဲ့တိုက်တွန်း" ဒါဟာဒီလယ်ပြင်၌သက်ဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခုပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ဤရွေ့ကားမှတ်ချက်များသည်သူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်တင်ထားသောနေကြသည်:
ညာဘက်အစပိုင်းမှာ, စာရေးသူစွဲထံမှဝေါဟာရ switches, ရေးသားခြင်း " ... တကယ်တော့, hypersexuality နှင့်ညစ်ညမ်း obsessive အားလုံးမှာစှဲမဟုတ်" ။ ဟုတ်ပါတယ်, hypersexuality သည်အခြားစံသတ်မှတ်ချက်များလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်လျှင်စွဲနှင့်အတူပြောရလျှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်စွဲရှုပ်ထွေးဖြစ်ငါထင်အဖြစ်စွဲ rephrasing ။ တစ်ဦးလက်တွေ့အခြေအနေတွင်များတွင်စွဲတချို့ features တွေဝေမျှသော်လည်း, စွဲလမ်းရာမှတစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါအချို့လမ်းများတွင် '' စွဲ '' ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦး OCD လက်အဝတ်လျှော်၏သွေးထွက်လက်တို့ကိုစောငျ့ရှောကျသှားသညျမိမိစမတ်ဖုန်းထားရန်ပြောသည်ဆိနှင့်အတူဤနှိုင်းယှဉ်ဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအားလျော့ပါးသက်သာစေသည်ဟုခံစားရသူမည်သူမဆိုဖိတ်ခေါ်လိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကောင်လေးသည်သူ၏ porn ငြင်းပယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမရှိနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြသကြောင်းပြောသည်နေကြသည်။ သို့သော်စွဲအခြားဘယ်လိုကြင်နာသူသို့မဟုတ်မငှါကိုပြအံ့သောငှါရှိသလော ဒါဟာခေတ်သစ်မှ neuroscience ပယ်ချထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုအကြားတစ်ဦး Cartesian အုပ်စုခွဲ, အကြံပြုထားသည်။ ဂျင်မ် Pfaus ဦးနှောက် / စိတ်ကိုပြင်ပမှာအရိပ်လက္ခဏာကိုဆိုလိုသည်လျှင်, မအများအပြားကိုကင်းစွဲဒီပြသကြပါ။
သူတို့ရဲ့စာအုပ်အကြှနျုပျ၏စာဖတ်ခြင်း Wilson က / ရော်ဘင်ဆင် "dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စေသောဘာမှစွဲလမ်းသည်" အရေးဆိုမှုပြုငါ့အားအကြံပြုမထားဘူး။ Dopamine ကြှနျုပျတို့အားလုံးအားလုံးကိုအချိန်ကိုဖြန့်ချိသည်နှင့်ငါသူတို့ကဒီ၏သတိမထားမိဖြစ်ကြောင်းမယုံကြည်နိုင်ပါ။ အကယ်စင်စစ်သူတို့၏အမှတ်စွဲ၏အချက်ဖို့မက်လုံးပေး salience တိုးမြှင့်ဖို့အဖြစ်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဂျင်မ် Pfaus ကရေးသားခဲ့သည်: "ဒါပေမယ့်မလှူနဲ့စွဲအကြားကွာခြားမှုရှိတယ်။ စွဲလမ်းအသစ်ကဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုအပါအဝင်အဓိကအကျိုးဆက်မရှိဘဲရပ်တန့်မရပါ။ compulsive အပြုအမူကိုရပ်တန်နိုင်ပါတယ်; အဲဒါကို "အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပဲခက်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ကနေဆင်းကိုကမ်းလှမ်းခံရအမေရိကန်စစ်သားအတွေ့အကြုံအခြေအနေအပြောင်းအလဲတစ်ခုလျင်မြန်စွာပင်ဘိန်းဖြူစွဲ (Robin) ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တမန်တော်အမှန်သူတို့ရဲ့ရိနာစွဲပါလာတဲ့သစ်ကိုဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပေမယ့်ဒါ (Jeff Schwartz, UCLA ကိုကြည့်ပါ) တို့၏ရောဂါကိုငြိမ်းသူတစ်ဦး compulsive စစ်သို့မဟုတ်လက်အဝတ်လျှော်၌မရှိ။ ဒါဟာအရက်ကနေဆုတ်ခွာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုမပါဘဲအလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ကြောင်းမှန်ပေမယ့်ကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အရက်စွဲနေတဲ့လူတန်းစားအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါငျးတို့သထားသင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူကိုရပ်တန့်ဖို့ရိုးရှင်းစွာ "ခက်ခဲ" ကြောင်းအဆိုပါအယူအဆကိုအနည်းငယ်ထည့်ပြီးမှတစ်ခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြ၏တစ်ခုခုပါပဲ။
ဂျင်မ် compulsive နှင့် ritualistic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအများအပြားစှဲမဟုတ် "ရေးသားခဲ့သည်; သူတို့ "အခြားကိစ္စများ၏လက်ခဏာပါပဲ။ သို့သော်အများဆုံးလျှင်အားလုံးမဟုတ်စှဲအခြားကိစ္စရပ်များ၏လက်ခဏာရှိနိုင်ပါသည်။ ဘရုစ်အလက်ဇန်းဒါးနှင့် Gabor ၏တောက်ပသောအလုပ်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ကှာနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်များ၏ထွက်လာပါတယ်အခန်းကဏ္ဍအပေါ် Mate ကိုကြည့်ပါ။
သူသည်မိမိလိင်တံနှင့်အတူအဘယ်သူအကူအညီကိုရှာကြံပျက်စီးမှီတိုင်အောင် masturbates သူတစ်ဦးလုလင်၏အစွန်းရောက်ကိစ္စကိုယူပါ။ ငါကခက်ကသူမဖြစ်မနေပေမယ့်စွဲမပြုကြောင်းပြောသည်ခံရဖို့သူ့ကိုအလင်းမယ်လို့ဘယ်လောက်ကြည့်ဖို့ရှာပါ။
ငါဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေရေးသားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုမှတစ်ရာခိုင်နှုန်းမျှအောင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုအလျင်စလိုထည့်ပြောခွင့်ပြုပါ။ မကြာသေးမီကစာအုပ်တစ်အုပ်တွင်လိင်အစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောမျှတသောမှတ်တမ်းဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Jim Pfaus ထက်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာဖြင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်! (link ကိုကြည့်ပါ - http://www.amazon.com/How-Sexual-Desire-Works-Enigmatic/dp/1107688043/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1453918582&sr=1-1